အောလောက၏ စိန်ခေါ်သံ (ဇာတ်လမ်းရှည် စ/ဆုံး) – Grab Love Story
အချိန်ကား ၁၉ ရာစု အစပိုင်း၊ တရုတ်ပြည်တွင် မန်ချုးမင်းဆက် အုပ်စိုးနေချိန်၊ မြို့တော် ပီကင်းတွင်လည်း အင်္ဂလိပ်များ ခြေချင်းလိမ်နေ၏။ သူတို့၏ ဘိန်းရောင်းဝယ်ရေးမှာလည်း များစွာတိုးတက်နေချိန်ဖြစ်ပြီး၊ တရုတ်ဘိန်းစားများမှာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲပေ။
သိုင်းလောကကြီးအတွင်း၌လည်း ဘိန်းစားသိုင်းသမားများ ခေတ်စားလာသည့်အပြင်၊ ဘိန်းစားမှ ခေတ်မီသည်ဟု ထင်နေကြချိန်လည်း ဖြစ်လေသည်။ လူပျင်းများ များပြားလာသဖြင့် သိုင်းသမားများမှာ အရင်ခေတ်ကကဲ့သို့ အလုပ်မရှိ၊ အကိုင်မရှိ ပိုက်ဆံဘယ်ကရမှန်းမသိ လျှောက်သွားမနေနိုင်ကြတော့ဘဲ အလုပ်များစွာ လုပ်နေကြရသည်။
သူတို့အထဲတွင် ဟန်ကျသောသူများကား … ငါးမျှားတံသိုင်းသမား၊ ပိုက်ကွန်သိုင်းသမား၊ တူသိုင်းသမားတို့ဖြစ်ကြပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြင့် သူများကို အောက်ကျို့စရာ မလိုသူများဖြစ်သည်။ သူတို့၏ လုပ်ငန်းများကား ငါးမျှားတံသိုင်းသမားက ငါးမျှား၊ ပိုက်ကွန်သိုင်းသမားကား လှေတစီးငှား၍ ငါးဖမ်း၊ တူသိုင်းသမားကား ပန်းပဲဖိုလုပ်စားသည့်အပြင် အားလျှင်အားသလို ကျောက်ထုလိုက်လေသည်။
ထိုသို့ ကမောက်ကမဖြစ်နေသော သိုင်းလောကကြီးထဲတွင် ဓားသိုင်းသမား၊ လက်သိုင်းသမားများကာ မျက်နှာငယ်လွန်းလှသည်။ ထင်းခွဲ၊ ၀ါးခုတ်၊ ရေထမ်း၊ အဝတ်လျှော်စသည်ဖြင့် သူတပါးကို အားကိုးရသော အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်များကို လုပ်ကိုင်စားကြရင်း အချို့သိုင်းသမားများမှာ ဖာလုပ်ငန်းကို ပိုက်ဆံရှိသူတို့က တည်ထောင်၊ ဆင်းရဲသူများက တန်းခေါင်း၊ တန်းထိမ်းများဖြစ်လာကြလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် အလုပ်မရှိသော သူတောင်းစားဂိုဏ်းမှာလည်း ဂိုဏ်းသားဦးရေ တိုးပွားကာ အင်အားကြီးမားလာလေသည်။
ရှောင်လင်၊ ဝူတန်၊ အော်မေ၊ ဝါဆန်း စသော ဘုန်းကြီး၊ ရသေ့၊ သီလရှင်များလည်း အေးအေးမနေနိုင်ပဲ ဆွမ်းခံ၍ စားရတော့သည်။ အတော်များများ ဂိုဏ်းကို စွန့်ခွာ လူထွက်ကုန်ကြပြီး သင့်တော်ရာသိုင်းပညာဖြင့် လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြ လေသည်။
နယ်စပ်ရှိ ဖာဘိန်းမြို့ကလေး …..
ထိုမြို့တွင် အထင်ကရဖြစ်သော သူဌေးကြီးတယောက်ရှိလေသည်။ သူ၏အမည်ကား စောင်ခြုံထု၊ ထူးဆန်းသော အမည်ဖြစ်ရာ၊ အတောင်ဆိတ် အတိတ်ဆောင်၍ ဇာတ်ကြောင်းပြန်ရလေသော် စောင်ခြုံထု၏ အဘိုးသည် မိမဲ့ဘမဲ့ ကလေကချေတယောက်ဖြစ်သည်။ မြို့တော်ပီကင်းတွင် သူခိုးလုပ်ရင်း စောင်ဆိုင်ကို ဖောက်ကာ ဤမြို့ကလေးသို့ ထွက်ပြေးလာပြီး စောင်ကုန်သည်လုပ်ရင်း ကြီးပွားလာကာ မျိုးရိုးအမည်ကိုလည်း စောင်မျိုးအဖြစ်ခံယူလိုက်တော့သည်။ ထိုသူကား စောင်ထဲနှိုက် ဖြစ်လေသည်။
သူ့သားဖြစ်သူ စောင်ရည်ရွှဲလက်ထက်၌လည်း မိဘလက်ငုတ်လုပ်ငန်းကိုသာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ယခု စောင်ခြုံထုလက်ထက်တွင်မှ စီးပွားရေး အင်ပါယာ ကျယ်ပြန့်လာပြီး ဘိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ သူဌေးကြီးတစ်ဦးဖြစ်သော ဖန်မျိုးနွယ်သူဌေးကြီး၏သမီး ဖန်ရှောက်ခင်နှင့် လက်ထပ်ကာ စောင်လုပ်ငန်း၊ ဘိန်းလုပ်ငန်းနှင့် ဖာလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံအနှံ့ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံတဝန်း ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာရှိသော်လည်း ဤမြို့ကလေးတွင် စီးပွားရေးကောင်း၍ အခြေချ နေထိုင်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ဤသို့ဖြင့် ဖာဘိန်းမြို့ကလေးမှာ သူဌေးကြီး၏ စွမ်းဆောင်မှုဖြင့် တိုးတက်ကြီးပွားနေတော့ရာ စောင်ခြုံထု၏ ဂုဏ်သတင်းမှာ နိုင်ငံအဝန်းသို့ ပျံ့နှံ့ နေလေတော့သည်။
ထိုအချိန်၌ သိုင်းလောကထဲတွင် အမျိုးသမီးသိုင်းသမားများသည် လူထွက်လာသော သီလရှင်များ၊ ရသေ့မမျာနှင့် ပူးပေါင်းကာ လင်ကျိရှောင် ဆိုသူ ထက်မြက်သော မိန်းမရွယ်တဦးအား ဂိုဏ်းချုပ်အဖြစ် တင်မြှောက်လိုက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်၏အကြီးဆုံး အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်များဂိုဏ်းကို တည်ထောင် လိုက်ကြသည်။ ဂိုဏ်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကား ယောကျာ်းများနည်းတူ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ကာမဂုဏ်ခံစားရန်နှင့် ဓားပြလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ စိတ်တူ ကိုယ်တူမိန်းမများ စုပေါင်းထားသဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်သောဂိုဏ်းကြီးသည် သူတောင်းစားဂိုဏ်းနည်းတူ ကြီးထွားဆပွားလာလေသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံအနှံ့ အပြားတွင် ဂိုဏ်းခွဲများထူထောင်ကာ အမျိုးသမီးများအား ဂိုဏ်းထဲဝင်လျှင် ဖုန်းပေးမည်၊ ကားပေးမည် … အဲ ဟုတ်ပေါင်၊ လယ်ယာများ၊ မြင်းများပေးမည်ဟု စည်းရုံးနေလေတော့သည်။
ဖန်ရှောက်ခင်၊ ဖန်ရှောက်ခင်သည် ဖန်မျိုးနွယ် သူဌေးကြီး၏ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလတ်ဖြစ်လေသည်။ အကိုဖြစ်သူ ဖန်လောင်တီး၊ မောင်ဖြစ်သူ ဖန်ဂုထွင်းတို့နှင့် နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရသူဖြစ်၍ အနေအထိုင် ပွင့်လင်းကာ အရှက်အကြောက်နည်းသူလည်းဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်ကပင် သိုင်းပညာကို အထူးတလည် လေ့လာခဲ့ရာ အတွင်းအားစုပ်သိုင်းကို ကောင်းစွာကျွမ်းကျင်သည်။
ဖန်လောင်တီးနှင့် ဖန်ဂုထွင်းတို့မှာလည်း ဖန်ရှောက်ခင်အား အလွန်ဂရုစိုက်ကြသဖြင့် သူတို့ပါ သိုင်းပညာများကို အပတ်တကုတ်ကြိုးစားကာ ရာဘာတုတ်သိုင်းကို အထူးတတ်မြောက်ကြသည်။ မောင်နှမသုံးယောက်စလုံး နှာကြီးသူများဖြစ်ကြပြီး ဖန်မောင်နှမများအဖြစ် သိုင်းလောကထဲတွင် စောင်ခြုံထု မသိအောင် လှုပ်ရှားနေလေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံပိုင် နယ်စပ်ရှိ ပြာတဇေ့မြို့ (ပြည့်တန်ဆာ) …..
မင်းညီမင်းသားဟန်ဖြင့် အတန်ငယ် ဝဖိုင့်သော်လည်း သန်စွမ်းရာတွင် မြင်းကပင်အရှုံးပေးရမည့်သူတဦးဖြစ်သည့် သူတဦးသည် အရက်အိုးများကို ပုံနေအောင်သောက်ပြီး မမူးသေးဟန်ဖြင့်လည်း ထပ်မှာနေလေသည်။
ထိုသူကား ဘုရင့်ယောက်ဖတဝမ်းကွဲ၏ မယားပါသား၏အိမ်တွင် ကြမ်းတိုက်ရသူ၏မြေးဖြစ်သော ထိပ်တင်မျိုးလင်းဖြစ်လေသည်။ ဘုရင်မင်းမြတ်၏ ဆွေမျိုးအရင်းကြီးဖြစ်သဖြင့် ထိုသို့ နန်းဆန်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရင့်အနားတွင် ကပ်၍နေရသော ဘုရင့်ကို ချီးကုန်းပေးရသည့်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
ထိုအလုပ်ရရှိခဲ့ပုံမှာ ဘုရင် တောကစားထွက်ချိန်၊ ဗိုက်နာလာ၍ တကိုယ်တည်း ခြုံထဲ၌ ကိစ္စရှင်းနေစဉ် အနား၌ ထင်းခွေနေသော မျိုးလင်းခေါ် ဤသူငယ်အားခေါ်၍ ချီးကုန်းခိုင်းရာမှ ဘုရင်သဘောကျ၍ ခန့်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရာထူးအမည်ကား ချီးတော်ကုန်း ဖြစ်လေသည်။ ထိုချီးတော်ကုန်း ထိပ်တင်မျိုးလင်းသည် တရုတ်ပြည်ထဲသို့ကူး၍ လောင်းကစားရန်၊ ဖာချရန် ကြံစည်နေလေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရင့်ထံမှ ပြည်တန်ပတ္တမြားကို ခိုးယူ လာခဲ့သောကြောင့်တည်း။
ထိုဆိုင်ထဲ၌ပင်လျှင် ဆောင်ဓားကိုလွယ်ထားသော သိုင်းသမားတဦးသည် လောင်းကစားဝိုင်းကို စောင့်ကြည့်နေလေ၏။ သူ၏ ဆောင်ဓားကား ဝက်ခုတ် ဓားမဖြစ်ကာ တရုတ်လူမျိုးစစ်စစ်တဦးဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်ဖက်တွင် စီးပွားရေးမကောင်းသဖြင့် ဝက်သားရောင်းစားရင်းသိုင်းသင်ကာ၊ သိုင်းတတ်လျှင် မြန်မာပြည် ဘက်သို့ စီးပွားရှာရန်ထွက်လာသူ ဖြစ်လေသည်။ ထိုစဉ်က သိုင်းသင်ခကား ဝက်ဆီတစ်တုံးဖြစ်လေသဖြင့် သိုင်းအတော်များများကို သင်ယူနိုင်ခဲ့လေသည်။
သူ့အမည်မှာ ရှောက်ဖုန်းကင်၊ ဝါသနာကြီးသူဖြစ်ပြီး နာမည်နှင့်လိုက်အောင် လုပ်စားတတ်လေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် နှစ်ဖက်ချွန်တဦးဖြစ်သည်။ ပြာတဇေ့မြို့တွင် စုမိဆောင်းမိရှိနေရာမှ မိဘများရှိရာ တရုတ်ပြည် လိုးရန်မြို့သို့ပြန်ရန် အားခဲထားလေသည်။
အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်များဂိုဏ်း၏ ဂိုဏ်းချုပ် လင်ကျိရှောင်သည် သိုင်းလောကထဲမှ နာမည်ကြီး တုတ်သိုင်းသမားဖြစ်သော တိုင်ထောင်ထုနှင့် လက်ထပ်ထားသူဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ဦးတွင် တိုင်ကွယ်ပွတ်ဆိုသော သမီးလေးတဦးကိုလည်း မွေးဖွားထားလေသည်။ ယခုအချိန်တွင် ၁၄နှစ် တင်းတင်းပြည့်ပြီဖြစ်၍ သူ့အဖေကိုယ်တိုင် ဂရုတစိုက် မြင်းဖိုမသန်းရအောင် ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ထားသည်။
သူတောင်းစားဂိုဏ်း၌ကား ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားသဖြင့် ဝါးစိမ်းတောင်ဝှေးကို ဆက်ခံရန် ဂိုဏ်းရှိ ရာထူးကြီးပုဂ္ဂိုလ်အတော်များများ ကြိုးစားနေကြသည်။ အလားအလာအကောင်းဆုံးကား ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး၏ တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်သူ သန်မြန်လေရှီးဖြစ်လေသည်။ လက်ထောက်ဂိုဏ်းချုပ်များ ဖြစ်ကြသော လှန်ဘာဂျာနှင့် ဖိုးရှောက်လင်တို့မှာလည်း ဂိုဏ်းချုပ် နေရာအတွက် ကြိုးစားနေကြလေသည်။
ထိပ်တင်မျိုးလင်းသည် တရုတ်ပြည်သို့သွားရောက်ရန် နည်းလမ်းရှာနေရာမှ လောင်းကစားဝိုင်းတွင် တရုတ်ရုပ်ပေါက်သောသူတဦးကို တွေ့သဖြင့် အားကိုးတကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ လူမြင်လျှင် မိုက်ကြေးခွဲချင်နေသော ရှောက်ဖုန်းကင်သည် ထိပ်တင်မျိုးလင်းကို သတိပြုမိသွားသဖြင့် သူ၏စားပွဲသို့ လျှောက်လာကာ လက်တဖက်ထောက်လိုက်လေသည်။
ထိပ်တင်မျိုးလင်းသည် လူပါးတဦးဖြစ်သဖြင့် သူ့အား နေရာပေးကာ အရက်တိုက်ရင်း မိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြလေ၏။ သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း ပြောကြရင်း တရုတ်ပြည်သို့သွားရန် ထိပ်တင်မျိုးလင်းက စိတ်ဝင်စားနေမှန်းကို သိသွားပြီး ရှောက်ဖုန်းကင် ကိုယ်တိုင်လည်း ပြန်ချင်နေပြီဖြစ်၍ တရုတ်ပြည်သို့ ခရီးထွက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတော့သည်။
နောက်တနေ့ နံနက်စောစောတွင် သူတို့နှစ်ဦးသည် နယ်စပ်ကိုဖြတ်၍ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မြို့လေးဖြစ်သော ဖာဘိန်းမြို့သို့ ထွက်ခွာခဲ့ကြလေသည်။ ဖာဘိန်းမြို့တွင်ကား သူဌေးကြီး စောင်ခြုံထု၏ စွမ်းဆောင်ချက်ဖြင့် ကြီးပွားလျက် ရှိလေသည်။ ရှောက်ဖုန်းကင်နှင့် ထိပ်တင်မျိုးလင်းတို့သည် အေကေကျကျဖြင့် ခြေလျင်ခရီးဖြင့်ထွက်လာကြသဖြင့် မိုးချုပ်မှ ဖာဘိန်းမြို့သို့ရောက်ရှိကြလေသည်။ ( အေကေ = အောက်ကြေး )
မြို့သို့ရောက်လျင်ရောက်ချင်း အနှိပ်ခန်းရှာကာ အနားယူကြလေသည်။ နားမလည် ပါးမလည် ထိပ်တင်မျိုးလင်းသည် အနှိပ်ခံရင်း အိပ်ပျော်သွားသဖြင့် အနှိပ်ခန်းမှ ဆော်က သူ၏ပိုက်ဆံဟူသမျှကို နှိုက်ယူကာ စီးပွားဖြစ်၍ ထွက်ပြေးသွားလေ၏။ ထိုသို့ အိပ်ပျော်သွားရာ မနက်မိုးလင်းမှပင် ရှောက်ဖုန်းကင်က လာနှိုးမှ နိုးတော့၏။ မိုးလင်းပြီဖြစ်၍ လျှောက်သွားရန် ပြင်ဆင်ကြလေ၏။ ထိုအခါမှ ပိုက်ဆံရှင်းရန် ကြည့်လိုက်သောအခါ ပိုက်ဆံဟူ၍ ကြေးပြားတပြားမှမရှိတော့သည်ကို တွေ့ရလေသည်။ အနှိပ်ခန်းပိုင်ရှင်နှင့် ပြဿနာဖြစ်ပွားကာ တိုက်ခိုက်ကြသော်လည်း အနှိပ်ခန်းလူမိုက်များကို မယှဉ်နိုင်သဖြင့် နှစ်ယောက်သား အလဲအကွဲ ဒဏ်ရာရကြလေ၏။ ထိုအခါမှ …
‘‘ ကြောက်ပါပြီ လော်ပန်၊ ကျွန်တော် မရှိရှိတာ ပေါင်နှံရောင်းချပြီး ပေးပါ့မယ် ”ဟု ထိပ်တင်မျိုးလင်းက ပြောလိုက်၏။
‘‘ ဟေ့ကောင်တွေ … ဒီကောင်တွေကို ရှာကြစမ်း ”
‘‘ ဟုတ်ကဲ့၊ ဟာ … တွေ့ပြီ ဒီဘက်ကကောင်ဆီမှာ …”
‘‘ ဟင်၊ ဒီကောင်က လဥသုံးလုံးနဲ့ပါလား …”
‘‘ ဟုတ်တယ် … မွေးကတည်းကပဲ “ ထိပ်တင်မျိုးလင်းကပြောလိုက်သည်။ အမှန်ကား ပတ္တမြားကို အောက်ခံ ဘောင်းဘီထဲ ထည့်လာသောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ ရှောက်ဖုန်းကင်ကလည်း ထောက်ခံသဖြင့် လူမိုက်များလည်း ဆက်မရှာတော့ပဲ ရှောက်ဖုန်းကင်၏ ငွေအားလုံးကို သိမ်းယူကာ နှစ်ယောက်စလုံးကို ကန်ထုတ်လိုက်လေ၏။
သူတို့လည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် ထွက်လာကြရင်း … ရှောက်ဖုန်းကင်က …
‘‘ သွားပြီ … ရွာပြန်ချင် ဖာခံမှရတော့မယ်၊ အဲလေ … ပိုက်ဆံတပြားမှ မရှိတော့ဘူး ”
‘‘ ငါကြံပါ့မယ်ကွာ … ငါ့မှာ ရောင်းစရာရှိပါသေးတယ် ”
‘‘ ဘာလဲ ပိုနေတဲ့ ဥတလုံးလား …”
‘‘ ဟုတ်တယ် …အာ ဘယ်က ဥကမှာလဲ …” နားနားကပ်၍ …
‘‘ ပတ္တမြားကွ … ပတ္တမြား ”
‘‘ ဟင် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ”
‘‘ ဟုတ်တယ် … စိတ်မချတာနဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီထဲ ထည့်ထားတာ၊ တော်သေးလို့ …”
‘‘ ဟုတ်လား … ဒါဆိုလဲ မြန်မြန်ထုကွာ …”
‘‘ အေး ရှေ့မှာ အများသုံးအိမ်သာရှိတာပဲ … ခရီးထွက်လာတာနဲ့ မထုရသေးဘူး ”
‘‘ ဟာ … ဒီကောင်၊ ပတ္တမြားကို ရောင်းဖို့ ပြောနေတာကွ ”
‘‘ အင်းလေ … မင်းက နည်းနည်းပါးပါး အသိအကျွမ်းရှိတော့ စုံစမ်းကြည့်ပေါ့ …”
‘‘ အေးလေ … စုံစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ ”
သူတို့လည်း လိုက်လံစုံစမ်းကြရာ တနေ့လုံးလုံး စုံစမ်းပြီးမှ ထိုမြို့၌ သူဌေးကြီး စောင်ခြုံထုသည် အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်ကြောင်း မဟုတ်တာ မှန်သမျှ အကုန်လုပ်ကြောင်း သိရှိရလေသည်။ သူတို့သည် စုံစမ်းသိရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက် စောင်ခြုံထု၏ အိမ်တော်ကြီးသို့ သွားရောက်လေသည်။ ပေါင်များကွမတတ် အသည်းအသန် ပြေးသွားကြပြီး ခြံဝသို့ ရောက်ချိန်တွင် အမောဆို့၍ ပစ်လဲသွားကြလေသည်။
ထိုစဉ် အပြင်မှ ပြန်လာသော စောင်ခြုံထုသည် သူ၏ဝေါ ရုတ်တရက်ရပ်သွားသဖြင့် ဆင်းကြည့်ရာ ဖုတ်လှိုက် ဖုတ်လှိုက်ဖြစ်နေသော သတ္တဝါ နှစ်ကောင်ကို တွေ့ရသဖြင့် ငယ်သားများအား လမ်းရှင်းခိုင်းလိုက်လေသည်။
ငယ်သားများက သူတို့အား ဆွဲဖယ်ရန်ပြင်လိုက်စဉ် ထိပ်တင်မျိုးလင်းက ‘‘သူဌေးကြီးအတွက် တန်ဖိုးရှိမယ့်ပစ္စည်းတစ်ခုပါတယ်”ဟု ပြောလိုက်လေသည်။
စောင်ခြုံထုလည်း စိတ်ဝင်စားသွားပြီး သူတို့နှစ်ယောက်အား အိမ်ထဲသို့ခေါ်လာရန် ပြောင်းလဲ အမိန့်ပေးလိုက်လေသည်။ သူတို့အား ရေမိုးချိုးခိုင်းပြီး ညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံလေသည်။
‘‘ ကဲ မောင်ရင်တို့က တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု ပါလာတယ်ဆို၊ ဘာများလဲ …”
‘‘ နေပါဦးဗျာ … ဗိုက်ဆာနေတော့ စားပြီးမှပြောပါရစေ …”
‘‘ ကောင်းပြီလေ … မဟုတ်ရင်တော့ သေဖို့သာပြင်ထား …မင်းတို့အတွက် နောက်ဆုံးညစာဖြစ်သွားမယ် ”
‘‘ ကျွန်တော်တို့မလိမ်ပါဘူး ခင်ဗျ … ကဲ စားပြီနော် …”
ထိပ်တင်မျိုးလင်းတို့လည်း အငတ်ဘေးဒုက္ခသည်များပမာ သွားဖြဲနားဖြဲစားသောက်ကြလေသည်။ စားစရာများကား ကမာ၊ ရုံးပတီသီး၊ ကြက်ဥ၊ ပန်းမုန်လာ၊ ကညွတ်နှင့် တရုတ်နံနံတို့ဖြစ်လေသည်။ အားလုံးသော စားစရာများသည် ကာမဆန္ဒကို အားပေးသောအစာများဖြစ်လေသည်။
သူတို့လည်း ငတ်ငတ်ဖြင့်စားလိုက်ပြီးမှ စောင်ခြုံထု၏ စာကြည့်ခန်းတွင် ဆွေးနွေးကြလေသည်။ စာကြည့်ခန်းတွင်လည်း အချိုပွဲဖြင့် ဧည့်ခံသဖြင့် ငှက်ပျောသီးများ၊ ပူတင်းနှင့် အင်္ဂလိပ်ကုန်သည်များထံမှရရှိသော ချောကလက်တို့ကို စားရသေးသည်။ ထိပ်တင်မျိုးလင်းလည်း အားရအောင်စားပြီးမှ သူဌေးကြီးနား ကပ်၍ …
‘‘ ဒီမှာ သူဌေးကြီး … ကိုင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ ”
စောင်ခြုံထုလည်းကိုင်ကြည့်လိုက်ရာ … မာတောင်နေသော အချောင်းတချောင်းနှင့် အလုံးသုံးလုံးကို ကိုင်မိသဖြင့်၊ သူက …
‘‘ များကို ဘာလုပ်ကြမလို့လဲဟင် … အဲလေ ခွေးမသား စော်ကားလှချည်လား …”
‘‘ သေချာကြည့်ပြီးမှပြောပါဗျာ၊ ဒီမှာ …”
‘‘ မင်းပစ္စည်းကို ငါက … ဘာလဲ ရုံသွင်းပြရမှာလား … လဥသုံးလုံးဆိုပြီး …”
‘‘ အမေမွေးကတည်းက နှစ်လုံးပါဗျ … ကျန်တဲ့တစ်လုံးက …” ဆိုပြီး ဘောင်းဘီကိုချွတ်ချလိုက်ရာ ရဲကနဲ အရာနှစ်ခုထွက်လာကြလေသည်။
တစ်ခုကား ပတ္တမြား၊ ကျန်တစ်ခုကား ထောင်ထနေသော လီးကြီးထိပ်မှ ကွမ်းသီး ဖြစ်လေသည်။ စောင်ခြုံထုလည်း သန်လှချည်လားဟု ချီးမွမ်းကာ ပတ္တမြားကြီးအား ယူကြည့်လိုက်လေသည်။
‘‘ အင်း တသက်နဲ့တကိုယ် ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ပတ္တမြားမျိုး မတွေ့ဖူးသေးဘူး ၊ မင်းဘယ်ကရတာလဲ … ခိုးလာတာလား၊ မှန်မှန်ပြောစမ်း ”
‘‘ ခိုးမလာလို့ မွေးကတည်းက သုံးလုံးမှမဟုတ်တာ … အမှန်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံဘုရင်မင်းမြတ်ဆီက ခိုးလာပြီး၊ ထွက်ပြေးလာတာ … အခု ဘိုင်ပြတ်တာနဲ့ ရောင်းစားတာ ”
‘‘ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ငါ့မှာ ဒီပတ္တမြားရဲ့တန်ဖိုးကို ပေးဖို့ ငွေမလောက်ဘူး၊ မင်းဟာက ပြည်တန်ပတ္တမြားပဲ၊ အင်း … မင်းလက်ခံမယ်ဆို တခုပြောချင်တယ် …”
‘‘ ဟုတ်ကဲ့ ပြောကြည့်လေ …”
‘‘ မင်းကို ငါ သားအဖြစ်မွေးစားလိုက်မယ် … ငါ့ရှိတဲ့ စည်းစိမ်အကုန်လုံး မင်းဟာပဲ … ဘယ်နှယ့်လဲ ”
ထိပ်တင်မျိုးလင်းလည်း ရှောက်ဖုန်းကင်နှင့် အတန်ကြာ တိုးတိုးတိုးတိုးဖြင့် တိုင်ပင်နေလေသည်။ ငါးမိနစ်လောက် ကြာသောအခါမှ စောင်ခြုံထုဖက် လှည့်၍ ‘‘အဖေ” ဟုခေါ်လိုက်လေသည်။ စောင်ခြုံထုလည်း ဝမ်းသာသွားပြီး ‘‘သားလေး” ဟု လှိုက်လှဲစွာခေါ်လိုက်သည်။ ပတ္တမြားကိုရမည့်အပြင် သူ့တွင် သားသမီးလည်းမထွန်းကားသဖြင့် ထိပ်တင်မျိုးလင်းအား အလွန်ချစ်ခင်သွားသောကြောင့်တည်း …။
ညတွင်းချင်းပင် အစေခံများကိုခေါ်ကာ ရပ်ကွက်လူကြီးများအား ဖိတ်ခိုင်းပြီး ထိပ်တင်မျိုးလင်းကို အမွေစားအမွေခံ သားအဖြစ် မွေးစားလိုက်လေသည်။ နာမည်ကိုလည်း စောင်မျိုးလင်းဟု ပြောင်းလိုက်ပြီး လူကြီးများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးလေသည်။ လူကြီးများပြန်သွားသောအခါ စောင်ခြုံထုသည် စောင်မျိုးလင်းအား အိမ်ပေါ် အခန်းကျယ်ကြီးထဲတွင် နေရာချထားပေးလေသည်။ ရှောက်ဖုန်းကင်ကိုကား စားလောက်သောက်လောက်ပေးကာ ပြန်လွှတ်လိုက်သဖြင့် လိုးရန်မြို့သို့ ပြန်သွားလေ၏။
စောင်မျိုးလင်းတဖြစ်လဲ ထိပ်တင်မျိုးလင်းသည် အခန်းကျယ်ကြီးထဲရှိ ခုတင်ကြီးပေါ်၌ လဲလျောင်းရင်း သူ၏ ဆန်းကြယ်လှသော ကံကြမ္မာကို အံဩကာ တွေးတောနေမိလေသည်။ ကြာကြာတော့ မတွေးလိုက်ရ … ဘောင်းဘီထဲတွင် ခိုးလိုးခုလုဖြစ်လာတော့သည်။ အကြောင်းကား စောင်ခြုံထု စေတနာဗလပွဖြင့် ကျွေးမွေးလိုက်သော ကာမအားပေးသည့် အစားအစာများက သောင်းကျန်းလာသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။
ထို့ကြောင့် သူသည် ဘောင်းဘီကိုချွတ်လိုက်ကာ ခုတင်ပေါ်၌ တကိုယ်တည်း ထုနေမိလေသည်။ အချက်ငါးဆယ်ခန့်ထုလိုက်ရာ လရည်များသည် အခန်းပြင်သို့တိုင် အားကောင်းကောင်းဖြင့် ပန်းထွက်သွားလေသည်။ ထိုစဉ် အခန်းပြင်မှ ဆဲသံတစ်ခုကို ကြားလိုက်ရလေသည်။
‘‘ ဟဲ့ ညကြီးမင်းကြီး ဘယ်ကောင်က ရေနဲ့ပက်တာလဲ … ဖာသည်မသားရဲ့၊ ယားနေလားဟဲ့ ” ဟူ၍ ကြားလိုက်ရကာ တဖျတ်ဖျတ်ဖြင့် ဝင်လာသော ခြေသံကိုကြားလိုက်ရသည်။
သူလည်း ရုတ်တရက် ကြောင်နေသဖြင့် ထိုအတိုင်း မကျသေးသော လီးကြီးတထောင်ထောင်ဖြင့် ကြည့်နေမိလေသည်။ ထိုစဉ် တောင့်တောင့် ဖြောင့်ဖြောင့် တရုတ်မတယောက် ယိုင်တိယိုင်တိုင်ဖြင့် ဝင်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်။ တရုတ်မက ‘‘ ဟယ် …အားရစရာကြီး “ ဟုပြောလိုက်လေသည်။
(မှတ်ချက် ။ ။ တရုတ်လိုပြောသည်များကို မြန်မာလိုသာ ရေးသားသွားပါမည်။)
သူကား တနေ့လုံး လျှောက်လည်ကာ နာမည်အတိုင်း ဖင်ရှောက်ခံပြီး ပြန်လာသော စောင်ခြုံထု၏ဇနီး ဖန်ရှောက်ခင် ဖြစ်လေသည်။ ခြေကုန်လက်ပန်း ကျနေရာမှ ထိပ်တင်မျိုးလင်း(စောင်မျိုးလင်း)၏ လီးကြီးကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့် စိတ်ဓာတ် တက်ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။
စောင်မျိုးလင်း၏လီးကြီးကား မြင်သူတိုင်းအောချလောက်အောင်ပင် ကြီးထွားလေသည်။ အရှည် ကိုးလက်မ၊ လုံးပတ်မှာ လက်မောင်းလောက်ရှိပြီး ထိပ်တွင်လည်း မီးသီးလောက်ရှိသော ကွမ်းသီးခေါင်းကြီးက ဟီးနေလေ၏။
မြန်မာပြည်၌နေစဉ် မြင်းများဆီမှ နည်းနာယူကာ အာဖရိကတိုက်မှရသော ယိုဟင်းဘီးဆိုသည့်ဆေးတမျိုးကိုသောက်ပြီး ပျားရည်သုတ် ခါချဉ်ကိုက်ခံကာ ကြီးထွားအောင်လုပ်ပြီး မြင်းမများထံ ထရိန်နင်ဆင်းနေသူဖြစ်သည်။ သို့သော် မြန်မာပြည်တွင် မိန်းကလေးများကလည်း မပွင့်လင်း၊ သူကလည်း သိပ်ပြီး အဖြစ်မရှိသဖြင့် မိန်းမမလိုးဖူးလိုက်ချေ။ အခုမှ တွေ့ရကြုံရခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ရှေ့လျှောက်၍ ထိပ်တင်မျိုးလင်း(စောင်မျိုးလင်း)ကို စာလုံးချုံ့သည့်အနေဖြင့် မျိုးလင်း ဟုသာ ရေးသားသွားပါမည်။
ဖန်ရှောက်ခင်သည် ထိုလီးကြီးကိုမြင်သဖြင့် အကြီးအကျယ်ဝမ်းသာသွားပြီး ပြေးဖက်ကာ ကုန်းမှုတ်လိုက်လေ၏။ စင်စစ် ဖန်ရှောက်ခင်မှာ အလွန် နှာကြီးသူဖြစ်ပြီး စောင်ခြုံထုနှင့် အားမရသဖြင့် တမြို့လုံးလှည့်ကာ ဖင်ခံနေသူဖြစ်လေသည်။
စောင်ခြုံထုမှာ သူ့ထက် အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်ကြီးသော လူကြီးပိုင်းသို့ ဝင်ကာစ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကျနေသူဖြစ်လေသည်။ ပထမ တလ နှစ်လသာ စံချိန်မီလိုးပေးနိုင်ပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လိုးအားကျလာလေသည်။ ထို့ကြောင့် ဖန်ရှောက်ခင်သည် သိုင်းလောကထဲ လှည့်လည်သွားလာကာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်လေသည်။
သူ၏ အတွင်းအားစုပ်သိုင်းဖြင့် သိုင်းသမားများအား လူညွန့်တုန်းအောင် လုပ်နိုင်သဖြင့် အားကောင်းမောင်းသန်သိုင်းသမားများ တဖြည်းဖြည်း ရှားပါးလာပြီး လင်ကျိရှောင်ဦးဆောင်သော အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်များဂိုဏ်းနှင့် ရန်ညှိုးရန်စတခု ထူထောင်မိလေသည်။
ယခုလည်း မျိုးလင်းအား တအားသဘောကျသွားကာ ခံရန်အားထုတ်လေတော့သည်။ မျိုးလင်း၏လီးကြီးအား ကုန်းမှုတ်နေရာမှ အတွင်းအား စုပ်သိုင်းဖြင့် စုပ်ယူလိုက်ရာ မျိုးလင်းလည်း တောင့်မခံနိုင်တော့ပဲ ဖန်ရှောက်ခင်၏ ပါးစပ်ထဲသို့ တအားကုန်ပန်းထုတ်လိုက်လေသည်။
ဖန်ရှောက်ခင်သည် ရုတ်တရက် ပန်းထွက်လာသောလရည်များကြောင့် အသက်ရှူပင် မှားသွားကာ ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်ဆိုးရင်း လူးလှိမ့်နေလေသည်။ ခဏကြာမှ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီး မျိုးလင်း အားရပါးရ လိုးနိုင်စေရန် အတွင်းအားအနည်းငယ်ကို မျိုးလင်း၏ကျောပြင်မှတဆင့်ထည့်ပေးလိုက်လေသည်။
ထိုအခါမှ မျိုးလင်းလည်း နေသာထိုင်သာရှိသွားကာ လီးကြီးမှာလည်း နောက်တကြိမ်ပြန်လည် အသက်ဝင်လာလေတော့သည်။ ဖန်ရှောက်ခင်လည်း ဝမ်းသာသွာကာ သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်လေသည်။
‘‘ မမနာမည်က ဖန်ရှောက်ခင်ပါ၊ သူဌေးကြီးဖန်ရဲ့သမီးပေါ့ “ (စောင်ခြုံထု၏ဇနီးဟု မပြောပေ)
‘‘ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်က မျိုးလင်းပါ၊ မြန်မာပြည်က လာတာ …”
‘‘ ဪသြော် … ဒီနေ့မှရောက်လာတာလား …”
‘‘ ဟုတ်တယ်လေ၊ စားပြီးသောက်ပြီး ထုပြီးနေတုန်း မမနဲ့တွေ့တာပဲ၊ မမက သိပ်လှတာပဲနော် “
‘‘ ဟင်း ဟင်း … လှရင်လဲ မမကို လိုးပေးလေ …”
‘‘ အား … ပွင့်လင်းလှချည်လား …”
‘‘ ဟုတ်တယ် မမကအဲလိုပဲ … ငယ်ငယ်တည်းက အကိုနဲ့မောင်နဲ့ကြားမှာ ကြီးလာတော့ ဒီလိုပဲလေ …”
‘‘ ကဲ ဒါဆိုလဲ မမပေးထားတဲ့ အတွင်းအားနဲ့ ကောင်းကောင်းကျုံးရတော့မှာပေါ့ … လာ မမ ” ဟုဆိုကာ ဖန်ရှောက်ခင်ကို ခုတင်ပေါ်သို့ ဆွဲလှဲ လိုက်လေသည်။
ထိုအချိန်အထိ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း ဂဃနဏ မသိကြသေးပေ။ မျိုးလင်းကလည်း အလည်လာသည်ဟုထင်သလို၊ ဖန်ရှောက်ခင် ကလည်း မျိုးလင်းကို စောင်ခြုံထု၏ လောလောလတ်လတ်မွေးစားလိုက်သော သားမှန်းမသိပဲ ဧည့်သည်တယောက်ဟုသာထင်နေလေသည်။ မသိရခြင်းကား လူကြီးစုံရာနှင့်မွေးစားသည့် အခမ်းအနားလုပ်ချိန်တွင် အိမ်တွင် မရှိသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။
မျိုးလင်းသည် ဖန်ရှောက်ခင်ကို ခုတင်ပေါ်သို့ ဆွဲလှဲလိုက်ပြီး လက်ခလယ်ဖြင့် ဖန်ရှောက်ခင်၏ စိကပ်နေသော အဖုတ်တွင်းသို့ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ ဖန်ရှောက်ခင်သည် အတွင်းအားစုပ်သိုင်းကို တတ်မြောက်ချိန်မှစ၍ သူ၏အဖုတ်ကို ကြိုက်သလို ချဲ့နိုင်ချုံ့နိုင်သဖြင့် ဤသို့ပုံမပျက်တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ချုံ့နိုင်သည့်အစွမ်းရှိသော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် လီးကြီးကြီးနှင့်သာ ခံလေ့ရှိလေသည်။
မျိုးလင်းလည်း လက်ခလယ်ဖြင့်သွင်းနေရာမှ စိတ်မထိန်းနိုင်သဖြင့် ကုန်းလျက်လိုက်လေသည်။ သူသည် အတွေ့အကြုံ မရှိသဖြင့် အပေါ်မှသာ အပြားလိုက်လျက်နေသဖြင့် ဖန်ရှောက်ခင်က နည်းပေးလမ်းပြလုပ်လိုက်ရလေသည်။
ထိုအခါမှ သူသည် ဖန်ရှောက်ခင်ပေးထားသော အတွင်းအားကို လျှာတွင် စုစည်းလိုက်ပြီး သူမ၏ အစိကို ထိုးထည့်လိုက်လေရာ ဖန်ရှောက်ခင်ထံမှ အားကနဲအသံထွက်လာလေသည်။ ထို့နောက် အဝတွင်တချက်တေ့လိုက်ပြီး လျှာကို အတွင်းအားသုံး၍ဆွဲဆန့်ကာ ဖန်ရှောက်ခင်၏အဖုတ်တွင်းသို့ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး အားရပါးရလျက်တော့သည်။
အမွှေးတိုင်တတိုင်ခန့်ကြာသော် ဖန်ရှောက်ခင်သည် မနေနိုင်တော့ပဲ …
‘‘ မောင်လေးရယ် မမကိုလိုးပေးပါတော့ …”
‘‘ လိုးပေးရင် ဘာပေးမှာလဲ “ မျိုးလင်းက ဈေးကိုင်လိုက်ရာ … ဖန်ရှောက်ခင်က …
‘‘ မောင်လေးကြိုက်တာပေးမှာပေါ့ …”
‘‘ ကောင်းပြီလေ၊ ကတိတည်ပစေနော် …” ဟုပြောလိုက်ပြီး အတွင်းအားကို လီးတွင်စုကာ ဖန်ရှောက်ခင်၏ အဖုတ်ဝသို့တေ့လိုက်သည်။
မသွင်းသေးပဲ အတွင်းအားကို ပုံမှန်လည်ပတ်နှုန်းရအောင်လုပ်နေစဉ်ပင် ဖန်ရှောက်ခင်က အတွင်းအားစုပ်သိုင်းကိုသုံး၍ အလိုက်သင့် ဆွဲသွင်း လိုက်လေသည်။ (မှတ်ချက်။ ။ လက်မသုံးပါ)
မျိုးလင်းလည်း ထိုအခါမှ သတိဝင်လာပြီး အတွင်းအားကို ခါးနှင့်လီးပေါ်သို့ မျှကာပို့ထားပြီး အားပါပါဖြင့် ဆောင့်လိုးတော့သည်။ ဖန်ရှောက်ခင်က အတွင်းအားစုပ်သိုင်းဖြင့် စုပ်ယူသော်လည်း မျိုးလင်းသည် သူ၏အတွင်းအားကို လီးပေါ်သို့ ပို့ပြီး ခံလိုက်၍ အတွင်းအားစုပ်သိုင်းမှာ မထိရောက်တော့ပေ။
ဆက်လက်၍ မျိုးလင်းလည်း ရှိသမျှအတွင်းအားကိုထုတ်၍ အားရပါးရ ဆောင့်လိုက်သောအခါ ဖန်ရှောက်ခင်၏နှုတ်မှ တအင်းအင်းမြည်သံများ ထွက်ပေါ်လာလေသည်။ ဖန်ရှောက်ခင်လည်း အားကျမခံ အတွင်းအားကို အဖုတ်သို့ပို့ကာ တန်ပြန်တိုက်စစ်ဖြင့် ပြန်ကော့လိုက်၊ နှုတ်ခမ်းသားများဖြင့် စုပ်ယူလိုက်ဖြင့် ကြိုးစားနေလေသည်။ ဖန်ရှောက်ခင်သည် အတွင်းအားသုံးကာစုပ်ယူပါသော်လည်း မျိုးလင်းက ပါးနပ်စွာဖြင့် ချေဖျက်ကာ တွင်တွင်သာ လိုးနေတော့သည်။
ထို့ကြောင့် ဖန်ရှောက်ခင်လည်း လရည်များကိုစုပ်ယူရန် မကြိုးစားတော့ပဲ အလိုက်သင့်ခံဆောင်နေလေတော့သည်။ တချက်တချက်တွင် အတွင်းအား ပြည့်ဝသော လိုးချက်ခံချက်များကြောင့်၊ သံသံချင်းထိသံလို ‘‘ထန် ဒလန်” စသောအသံများလည်း ထွက်လာတတ်လေသည်။
ထမင်းအိုးတလုံးချက်ခန့်ကြာသော် မျိုးလင်လည်း မဆောင့်နိုင်တော့ပဲ ခါးညောင်းသဖြင့် ဖန်ရှောက်ခင်၏ ကိုယ်ပေါ်မှဆင်းကာ ခုတင်ပေါ်သို့ ပက်လက်လှန်ချလိုက်လေသည်။ လီးကြီးကား အလံတိုင်ကဲ့သို့ ထောင်မတ်လျက်ပင် …။
ဖန်ရှောက်ခင်လည်း ‘‘ မောင်လေး၊ မောသွားရင် မမလုပ်ပေးမယ်လေ …” ဟုပြောကာ အလံတိုင်ပေါ်မှနေ၍ ထိုင်ချလိုက်လေသည်။ ထို့နောက် အတွင်းအားကို အဖုတ်ထဲသို့စုစည်းလိုက်ပြီး ဆောင့်ချလိုက်၊ လှုပ်ရှားနေလေသည်။
မျိုးလင်းလည်း လီးကြီးကို သံချောင်းကဲ့သို့ မာတောင်နေအောင် အတွင်းအားကိုသုံးပြီး အောက်မှနေ၍ ကော့ကော့ပေးလေသည်။ ဖန်ရှောက်ခင်က ဆောင့်လိုက်၊ မျိုးလင်းကကော့ပေးလိုက်ဖြင့် အခန်းထဲတွင် ‘‘ထန် ဒလန်” စသောအသံများလည်း ထွက်ပေါ်နေလေသည်။
မျိုးလင်းသည် အတွင်းအားကို လီးအရင်းတွင်ထားပြီး အဖုတ်တွင်း၌ စကောဝိုင်းလှည့်ပေးလိုက်သောအခါတိုင်း ဖန်ရှောက်ခင်ထံမှ ‘‘ဟိုင်းယား ဟိုင်းယား” ဖြင့် မာန်သွင်းသံများထွက်ပေါ်လာလေသည်။
အတွင်းအားပြိုင်ရင်းဖြင့် မျိုးလင်းသည် အံကြိတ်၍ အောက်မှ ဆောင့်တင်ပေးနေရာမှ အမွှေးတိုင်တတိုင်ခန့်အကြာတွင်ကား သူ့ထက်အတွင်းအားသာသူ ဖန်ရှောက်ခင်ကို အရှုံးပေးကာ လရည်များကို ထုတ်ပေးလိုက်ရလေတော့သည်။
ပန်းမထုတ်ခင်၌ မျိုးလင်းလည်း တကိုယ်လုံးရှိ အတွင်းအားများကို လီးတွင် စုစည်းလိုက်ကာ လက်သီးကိုဆုပ်၍ ခါးကော့ထားပြီး လရည်များကို ထုတ်ပေး လိုက်တော့သည်။ အားရပါးရပန်းလိုက်သော လရည်များကြောင့် ဖန်ရှောက်ခင်လည်း ဆောင့်နေရာမှ လရည်များပေါ်တွင် မြောက်တက်သွားပြီး လေထဲ၌ပင် ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်သွားကာ တချီပြီးသွားလေတော့သည်။ ရေပန်းသဖွယ် ထွက်လာသော လရည်များကုန်သွားမှ ခုတင်ပေါ်ပြန်ကျလာကာ လဲလျောင်းရင်း အနားယူနေလေသည်။
နောက်တနေ့ မနက်မိုးလင်းသောအခါတွင်ကား ဖန်ရှောက်ခင်ကို မတွေ့ရတော့ပေ။ သူတယောက်ထဲ ခုတင်ပေါ်တွင် အရည်များပတ်လည်ဝိုင်း၍ ကျန်ရစ်နေသည်ကိုသာ တွေ့ရတော့သည်။ မျိုးလင်းလည်း ပေပွနေသည်များကို ဆေးကြော၊ မျက်နှာသစ် သွားတိုက် ရေချိုးလုပ်ပြီး အစေခံများကိုခေါ်၍ ရှင်းခိုင်းရလေသည်။ ပြီးမှ အောက်သို့ဆင်းလာကာ ထမင်းစားပွဲ၌ စောင်ခြုံထုနှင့်တွေ့ရလေသည်။
‘‘ အဖေ နေကောင်းတယ်နော် …”
‘‘ အေး ကောင်းတယ်၊ ဒါနဲ့ညက မင်းအိပ်ရရဲ့လား “
‘‘ ရပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ “
‘‘ မသိဘူးလေ … ညဦးပိုင်းက မင်း သိုင်းကျင့်နေတဲ့အသံများကြားလားလို့ “
‘‘ မဟုတ်ပါဘူး အဖေရယ် … ဪသြော် ဒါနဲ့ အခုမှသတိရတယ် “
‘‘ ဘာကိုလဲကွ “
‘‘ တရုတ်ပြည်ကိုလာတာ သိုင်းသင်ဖို့အဖေရဲ့ … အဲဒါ ကျွန်တော့်ကို ကူညီပါဦး “
‘‘ အေး အေး ဒီနေ့လား …”
‘‘ မြန်လေ ကောင်းလေပဲ အဖေ “
‘‘ ကဲ ကဲ မနက်စာစားလိုက်ဦး …ဪသြော် ဆော်ခေါ်ချချင်လဲပြောနော် … ဒီမြို့ကိုငါပိုင်တယ် “
‘‘ ဟုတ့်ကဲ အဖေ “
ထိုသို့ပြောလိုက်ပြီး နံနက်စာကို တဝတပြဲစားသောက်ကာ အခန်းထဲပြန်၍ အနားယူရင်း ဖန်ရှောက်ခင်အကြောင်း တွေးနေမိလေသည်။ တွေးရင်း တွေးရင်းဖြင့် လီးတောင်လာကာ ငါးချီဆက်တိုက် ထုပစ်လိုက်လေသည်။ ဒီတခါတွင်ကား အခန်းတံခါးကို ပိတ်ထားသဖြင့် ပြဿနာမရှိတော့ …။
ဤသို့ဖြင့် နေ့လည်ရောက်သောအခါတွင် စောင်ခြုံထုက သူ့ကို အခေါ်လွှတ်လိုက်သဖြင့် အဝတ်အစားများဝတ်ကာ ပြင်ဆင်နေလေသည်။
စောင်ခြုံထုမှာကား အပြင်မှ ပြန်ရောက်လာသော ဖန်ရှောက်ခင်နှင့် စကားစမြည်ပြောနေလေသည်။ နေ့ခင်းဘက်ဖြစ်သော်လည်း ဖန်ရှောက်ခင် တယောက် ခွင်မတည့်သဖြင့် ပြန်လာခြင်းဖြစ်လေသည်။ ထိုအခါ စောင်ခြုံထုက …
‘‘ ဘယ်လိုလဲ မိန်းမ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလား … ပြန်လာတာ စောသားပဲ “
‘‘ အင်းလေ … အဲဒါဆာလာတာနဲ့ အိမ်မှာပဲနေတော့မယ်ဆိုပြီး ပြန်လာတာ …”
‘‘ ဪ … မင်းကိုကိုယ်တခုပြောရဦးမယ် …မနေ့ညကပဲ သားတယောက် အမွေစားအမွေခံ မွေးစားလိုက်တယ်”
‘‘ ဟုတ်လား … ဘယ်လိုနေလဲ “
‘‘ မဆိုးပါဘူး ကောင်လေးက ရည်ရည်မွန်မွန်လေးပါ …”
‘‘ ဒါဆို အခု ထမင်းပွဲမှာ တွေ့ပေးလေ “
‘‘ အေး အေး ဟော ဟိုမှာ ပြောရင်းဆိုရင်း ရောက်လာပြီ “
‘‘ ဟင် …”
‘‘ မိန်းမ ဘာဖြစ်လို့လဲ “
‘‘ ဟင့်အင်း … ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး “
ဖန်ရှောက်ခင်မှာ ညက သူနှင့်လိုးခဲ့ကြသော မျိုးလင်းကိုမှတ်မိသွားသဖြင့် အာမေဋိတ်သံပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် မျိုးလင်းက မမှတ်မိ၊ ညဖြစ်သည့်အပြင် လိုးချင်စိတ်များကသာ နေရာယူထားသဖြင့် သေချာမမှတ်မိခြင်းဖြစ်၏။ ထို့နောက် စောင်ခြုံထုက …
‘‘ သား ဒီမှာ …ဒါ အဖေ့မိန်းမ “
‘‘ ဟုတ်ကဲ့ အဖေ … မင်္ဂလာပါ အမေ “
‘‘ အေးအေး သား “
‘‘ မနေ့က သူအပြင်သွားနေလို့ မင်းနဲ့မတွေ့လိုက်ဘူး … နာမည်က ဖန်ရှောက်ခင်တဲ့ “
‘‘ ဟေ့ကောင် ဘာဖြစ်တာလဲ “
‘‘ ဪသာ် အမေ့နာမည်က လှပပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံလို့ပါ “
‘‘ အေး မြှောက်ပြော သိလား …” ဖန်ရှောက်ခင်က မျက်စိမှိတ်ပြလိုက်ရင်း ပြောလိုက်သည်။
စောင်ခြုံထုကား ဘာမှမသိဘဲ … “ ဟောင်လား ဟောင်လား …. ထိုက်ဟောင်လား ” ဟုပြောလိုက်လေသည်။
ပြီးလျှင် ထမင်းစားခန်းထဲသို့သွားပြီး အသီးသီးနေရာယူလိုက်ကြလေသည်။ စားသောက်ဖွယ်ရာများကား ယမန်နေ့ ညကကဲ့သို့ပင် သဘောတရားရှိသော အစားအသောက်များဖြစ်ကြသည်။
စောင်ခြုံထုမှာ လီးသေးသူဖြစ်သဖြင့် ဆေးမျိုးစုံ သုံးစွဲကာ ဖန်ရှောက်ခင်ကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ မျိုးလင်းနှင့်တွေ့မှ ဖန်ရှောက်ခင်တယောက် လျှောက်မလည်နိုင်တော့ပဲ ဖြစ်သွားခြင်းပေတည်း။
‘‘ မိန်းမ ငါ့သားက သိုင်းသင်ချင်တယ်ပြောတယ် အဲဒါ မင်းက အဆက်အသွယ်တွေရှိတော့ လုပ်ပေးလိုက်ပါဦး “
‘‘ အင်း ကိုကြီးနဲ့ မောင်လေးဆီမှာအပ်ပေးမယ်လေ … အခုတော့ အတွင်းအားဆေးလုံးပေးလိုက်မယ် … ရော့ ထမင်းစားပြီး သောက်လိုက် …”
‘‘ ကျေးဇူးပဲ အမေ “
နေ့လည်စာစားအပြီးတွင် ဖန်ရှောက်ခင်က မျိုးလင်းအနားကပ်၍ ‘‘ညကျလာခဲ့မယ်နော်” ဟုပြောပြီး စောင်ခြုံထုနှင့် လိုက်သွားလေသည်။
စောင်ခြုံထုကား မည်သူကိုမျှ မသင်္ကာမဖြစ်ပဲ ဆယ့်သုံးနှစ်သမီးလေးကို ခေါ်ဖြုတ်ရန်စဉ်းစားနေ လေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုလောက်မှ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောကြောင့်တည်း။
ထိုအချိန်တွင်ကား သူတောင်းစားဂိုဏ်း၌ အလုပ်ရှုပ်နေကြလေသည်။ သူတောင်းစားဂိုဏ်းချုပ်ကြီး သန်မြန်တုတ်ကြီး ဖာကျိုးပြီး ကွယ်လွန်သွားသဖြင့် ဈာပနနှင့် အခြားပြုဖွယ်ကိစ္စများကြောင့် ပျားပန်းခတ်မျှ လှုပ်ရှားနေကြလေသည်။ နိုင်ငံအဝန်း သိုင်းဂိုဏ်းကြီးများကို ဖိတ်စာများပို့ပြီး အသုဘနှင့် ဂိုဏ်းချုပ်သစ် ရွေးချယ်ပွဲကို တပြိုင်တည်းကျင်းပရန် ရည်ရွယ်နေကြသည်။ သားဖြစ်သူ သန်မြန်လေရှီးမှာကား အဖေအတွက် ပူဆွေးပြီး စိတ်ညစ်ညစ်ဖြင့် တမြို့လုံးလှည့်လည်ကာ ဖာချနေလေသည်။ ဧည့်သည်များရောက်လာမှ ဧည့်ခံရန်လိုက်ရှာရာ မူးပြဲပြီး ဖာတန်း၌ လဲနေသည့် သန်မြန်လေရှီးကို တွေ့ရလေသည်။ ဂိုဏ်းသို့ ပြန်ရောက်မှ အမူးပြေဆေးတိုက်ပြီး ဧည့်ခံခိုင်းရလေသည်။
ဧည့်သည်များမှာ ရှောင်လင်၊ ဝူတန်၊ အော်မေ၊ ဝါဆန်း၊ ခွန်လွန်စသော ဂိုဏ်းကြီးများမှဖြစ်ပြီး သိုင်းလောက၏ အင်အားအကြီးဆုံးဂိုဏ်းမှ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးအတွက် အလွန်ဝမ်းနည်းရပါသည်ဟု တတွတ်တွတ်ပြောနေကြလေသည်။ သူတို့၏ သူတောင်းစားဂိုဏ်းမှာ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအားဖြင့် ဂိုဏ်းသားဦးရေ ဆယ်သန်းကျော်ရှိသဖြင့် ဤသို့ခန့်ညားလေးစား ရခြင်းဖြစ်လေသည်။ အခြားဂိုဏ်းများမှာ အင်အားမတောင့်တင်းသည်ကို လာရောက်သူများကို ကြည့်၍ သိနိုင်လေသည်။
ရှောင်လင်ကျောင်းမှ ရှိစုမဲ့စု ဆရာတော် ရှောင်ကုန်း ဦးဆောင်သော ဘုန်းကြီးရှစ်ပါး … ကျောင်းတွင် တစ်ပါးသာ အစောင့်ကျန်ခဲ့သည်။ အခြား အော်မေ ၃၊ ဝူတန် ၂၀၊ ကျန်ဂိုဏ်းများမှာလည်း အားလုံးပေါင်းမှ အစိတ်ခန့်ရှိသည်။ ဝူတန်မှာ အတော်အသင့်အင်အား ရှိသေးပြီး ရသေ့များဖြစ်၍ ဗေဒင်၊ ဓါတ်ရိုက် ဓါတ်ဆင်လုပ်ကာ အသက်ဆက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
နေ့ခင်း နေပူကြီးထဲတွင် သူတောင်းစားဂိုဏ်းချုပ်ကြီး၏အလောင်းကို မီးသင်္ဂြိုဟ် ဂါရဝပြုရာ လက်ထောက်ဂိုဏ်းချုပ်များဖြစ်ကြသော လှန်ဘာဂျာနှင့် ဖိုးရှောက်လင်တို့မှ မီးရှို့ပေးပြီးအားလုံးဝိုင်းဝန်း အရိုအသေပေးကြလေသည်။
ညနေစောင်းသော် မြို့ပြင်ဇရပ်ကြီးတွင် အစည်းအဝေးလုပ်ကြပြီး ရှေ့ဆက်ရမည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များအတွက် အားလုံး စုစည်း၍တိုင်ပင်ကြကာ ဂိုဏ်းချုပ်သစ် ရွေးချယ်ပွဲအတွက် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်ပြီး နောက်တနေ့ရောက်လျှင် ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြလေသည်။
ဒိုင်လူကြီးများကား သက်ကြီးဝါကြီးဂိုဏ်နာယကများ၊ ဂိုဏ်းခွဲမှူးများဖြစ်ပြီး သူတို့က ပြိုင်ပွဲဝင်များဖြစ်ကြသော သန်မြန်လေရှီး၊ လှန်ဘာဂျာနှင့် ဖိုးရှောက်လင်တို့အား အမှတ်ပေးကြမည်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲများမှာ ၁။အရှည်ပြိုင်ပွဲ ၂။အတုတ်ပြိုင်ပွဲ ၃။အပန်းပြိုင်ပွဲ ၄။အကြာပြိုင်ပွဲ ၅။ခံနိုင်ရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ပြိုင်ပွဲ ၆။အမှုတ်ပြိုင်ပွဲနှင့် ၇။ထိရောက်မှုပြိုင်ပွဲ တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် ဂိုဏ်းချုပ်နေရာရရှိရေးအတွက် အစွမ်းကုန် ပြင်ဆင်နေကြလေသည်။
နောက်တနေ့ ရောင်နီလာချိန် …. နာယကကြီးတစ်ဦးက ပြိုင်ပွဲကို ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ ထို့နောက် သန်မြန်လေရှီး၊ လှန်ဘာဂျာနှင့် ဖိုးရှောက်လင်တို့ တန်းစီ၍ဝင်ရောက်လာကြသည်။ ဒိုင်လူကြီးများအား ဂါရဝပြုလိုက်ကြပြီး ပရိတ်သတ်များဆီမှ လက်ခုပ်သံများကို နားထောင်လိုက်ကြသည်။
ပြိုင်ပွဲအမှတ်စဉ် ၁။အရှည်ပြိုင်ပွဲ … သန်မြန်လေရှီး ၉လက်မ၊ လှန်ဘာဂျာ ၈လက်မခွဲ၊ ဖိုးရှောက်လင် ၈လက်မ။ ဤသို့ ပထမပွဲတွင် သန်မြန်လေရှီးက နိုင်လိုက်သဖြင့် သူ၏ပရိတ်သတ်များက ဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်လိုက်ကြသည်။ သူသည် မိန်းကလေးများဘက်သို့လှည့်ပြီး ကော့ပြလိုက်ရာ ဟေးကနဲ အသံကြီး ထွက်လာလေသည်။ လှန်ဘာဂျာကား လက်မဝက်နှင့် ကပ်ရှုံးရသဖြင့် မကျေမနပ်ဖြစ်နေလေသည်။
ဒုတိယပွဲစဉ် အတုတ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ သန်မြန်လေရှီး ၈လက်မ၊ လှန်ဘာဂျာ ၁ဝလက်မ၊ ဖိုးရှောက်လင် ၈လက်မ။ လှန်ဘာဂျာ အနိုင်ရသွားသည်။ သူ့ပရိတ်သတ်များက ထအော်ရာ သန်မြန်လေရှီး၏ပရိတ်သတ်များနှင့် ညိကြလေသည်။ သို့သော် ဝိုင်းဝန်းဖြန်ဖြေလိုက်ကြသဖြင့် ပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားလေသည်။
သုံးပွဲမြောက် အပန်းပြိုင်ပွဲ … ပထမဆင့်အနေဖြင့် ကွာလီဖိုင်ယာ ခေါ် လရည်စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲရသည်။ ဒိုင်လူကြီးများက ပေနှစ်ဆယ်ရောက်အောင် ပန်းထုတ်နိုင်မှ လရည်စစ်ပွဲအောင်မြင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားလေသည်။ ဒိုင်လူကြီးများက အသင့်ပြင်ဟုပြောပြီး စည်သံကြားလျှင် ပန်းထုတ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကာ ပစ်ကွင်းဖက်သို့ မျက်နှာမူခိုင်းထားလေသည်။ ထို့နောက် စည်သံကြီး ဒုန်းကနဲထွက်လာသဖြင့် အားလုံး ဆတ်ကနဲဖြစ်သွားကြသည်။ ဒိုင်လူကြီးများက စစ်ဆေးရာ တယောက်မှ ထွက်မလာကြသဖြင့် နောက်တကြိမ် ပြန်လည်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ပြောကြားလေသည်။ အကြောင်းမှာကား စည်သံကြီး ဒုန်းကနဲကို လန့်သွားပြီး မထွက်ကြခြင်းဖြစ်လေသည်။
နောက်တကြိမ်တွင်မူ တယောက်ချင်းယှဉ်ပြိုင်ရန် ဖိုးရှောက်လင်က အကြံပြုလေသည်။ ထို့ကြောင့် ပထမဆုံးအဖြစ် အကြံပြုသူ ဖိုးရှောက်လင်က စတင်ပန်းထုတ်လိုက်ရာ နှစ်ဆယ့်ငါးပေရောက်လေသည်။ လှန်ဘာဂျာက ပေနှစ်ဆယ်သာ ရောက်ပြီး သန်မြန်လေရှီးမှာ ပေငါးဆယ်အထိရောက်လေသည်။ လရည်စစ်ပွဲဖြစ်၍ သန်မြန်လေရှီး အနိုင်မရသေးပေ။
ထို့နောက် ပြိုင်ပွဲစတင်ရာ … သန်မြန်လေရှီးက စတင်ယှဉ်ပြိုင်လေသည်။ အတွင်းအားကို လီးပေါ်သို့ ပို့ပြီး ပန်းထုတ်ရာတွင် ပေ ၁ဝဝမျှ ရှည်လျှားသော ကွင်းကြီးတွင် ၆၀ ရောက်လေသည်။ ပရိတ်သတ်အား လက်မထောင်ပြပြီး ကွင်းဘေးထိုင်ချလိုက်သည်။ ဒုတိယ ယှဉ်ပြိုင်သူကား ဖိုးရှောက်လင် သူက ပေ ၇၀ ရောက်သဖြင့် ပရိတ်သတ်များ အံ့ဩသွားကြသည်။ သန်မြန်လေရှီး ရှုံးနိမ့်ရခြင်းအကြောင်းက လရည်စစ်ပွဲတွင် အင်အားကို မလိုအပ်ဘဲ ဖြုန်းတီးလိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ နောက်ဆုံးထား ယှဉ်ပြိုင်သူကား လှန်ဘာဂျာဖြစ်သည်။ ဖင်များပါကျုံ့သွားအောင် အတွင်းအားပါပါဖြင့်ပန်းထုတ်လိုက်ရာ ကွင်းထိပ်ရှိ စားပွဲတွင် ထိုင်ကာ အမှတ်ပေးနေကြသော ဒိုင်လူကြီးများအား သွားစဉ်လေသည်။ အချိုလွန်သွားသောကြောင့် ဤမျှခရီးရောက်ရခြင်း ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် ဒိုင်လူကြီးများက လှန်ဘာဂျာအား စော်ကားမှုဖြင့် အနီကတ်ပြလိုက်သောကြောင့် ပေ ၇၀ ရောက်သူ ဖိုးရှောက်လင်က အနိုင်ရသွားလေတော့သည်။ လှန်ဘာဂျာမှာ မခံချိမခံသာဖြစ်နေသလို သန်မြန်လေရှီးမှာလည်း မပါးနပ်၍ ခံလိုက်ရခြင်းကို ဒေါသထွက်နေလေသည်။ ယခုအချိန်တွင် သုံးယောက်စလုံး တစ်ပွဲစီအနိုင်ဖြင့် တူညီသွားကြလေသည်။
ဤသို့ဖြင့် အနားပေးချိန် နာရီဝက်ရရှိကြလေသည်။ သူတို့လည်း ငှက်ပျောသီးစား၊ ကြက်ဥသောက်ဖြင့် အားမွေးကြပြီး လီးကြီး တန်းလန်းတန်းလန်းနှင့် ဟန်ရေးတပြပြဖြစ်နေလေသည်။ အနားပေးချိန်ပြည့်သဖြင့် အားလုံး ကွင်းထဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြလေသည်။ သန်မြန်လေရှီးကား ဖခင်၏အရိုက်အရာကို ထိန်းသိမ်းရန် အရိုးကျေကျေလရည်ခန်းခန်း ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသောပုံမျိုးနှင့် တက်ကြွနေလေသည်။
မကြာမီပင် ဒိုင်လူကြီးများရောက်လာပြီး စတုတ္ထပွဲစဉ်အဖြစ် အကြာပြိုင်ပွဲကို ယှဉ်ပြိုင်ကြရလေသည်။ ယှဉ်ပြိုင်ပုံကား ပြိုင်ပွဲဝင်သုံးယောက်စလုံး သက်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးဆီတွင် အမှုတ်ခံ ကြရမည်ဖြစ်သည်။ မှုတ်ပေးမည့်အမျိုးသမီးများကား လင်ကျိရှောင်၏ အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်များဂိုဏ်းမှ အကူအညီကို တောင်းခံထားခြင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးဂိုဏ်းချုပ် လင်ကျိရှောင်လည်း စေတနာဗလပွဖြင့် မှုတ်ပေးရန် ၃ဦး၊ အလိုးခံရန် ၃ဦး၊ အရန် ၃ဦးတို့ကို ပေးပို့လိုက်ရာ … သူလိုက်မည် ငါလိုက်မည်ဖြင့် အငြင်းပွားခဲ့ကြသေးသည်။ လင်ကျိရှောင်ကိုယ်တိုင် လိုက်ချင်သော်လည်း ယောကျာ်းဖြစ်သူ တိုင်ထောင်ထုကတားသဖြင့် နေခဲ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်။ ဤသို့ဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင် ၃ဦးသည် ကွင်းထဲတွင် အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေကြသော အမျိုးသမီးများဆီသို့ ရင်ဘောင်တန်း၍ လျှောက်လှမ်းလာခဲ့ကြလေသည်။
ထိုမိန်းမများရှေ့သို့ရောက်သော် အားလုံး လီးများကို ပါးစပ်များထဲသို့ထိုးထည့်လိုက်ကြလေသည်။ ပထမ စစချင်း မမှုတ်သေး … ဒိုင်များက အမိန့်ပေး လိုက်မှ စတင်မှုတ်ကြတော့သည်။ စသည်နှင့်တပြိုင်နက် တပြွတ်ပြွတ်တစွတ်စွတ် အသံများက တကွင်းလုံးညံအောင် ထွက်ပေါ်လာတော့သည်။ အမျိုးသမီးဂိုဏ်းမှ ပေးပို့လိုက်သော မိန်းမများကလည်း အားရပါးရမှုတ်နေကြပုံမှာ ဘယ်တုန်းကများ ငတ်နေသည်မဆိုနိုင်။ သုံးတွဲလုံးဆီမှ အသံဗလံများထွက်နေကြသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်တို့ တဟင်းဟင်းညည်းသလို မိန်းမများကလည်း အင့်ကနဲ့အင့်ကနဲ အော်နေကြသည်။
တနာရီလောက်ကြာလာသည်အထိ မည်သူ့မည်သူမျှ ဂိုးမသွင်းနိုင် အဲအဲ … မပြီးကြသေး။ ထို့ကြောင့် ဒိုင်လူကြီးများ စုဝေးတိုင်ပင်ကြပြီး အရှိန်တိုးမြှင့်ကာ မှုတ်ခိုင်းတော့သည်။ သူတို့လည်း အတွင်းအားကို လီးဆီသို့ပို့ကာ အစွမ်းကုန်ထိန်းထားရင်း တယောက်နှင့်တယောက် နောက်ပြောင်ရှုတ်ချနေကြလေသည်။
ဤသို့ဖြင့် ဒိုင်လူကြီးများက စိတ်မရှည်ကြတော့ပဲ နောက်ထပ် နည်းလမ်းတခုကို ထပ်မံအသုံးပြုလေသည်။ နည်းလမ်းမှာ ဒိုင်လူကြီးများက ၁ မှ ၁ဝဝ အထိရေတွက်မည် … ၁ ဟုရေတွက် ပါက မိန်းမများက အားရပါးရတချက်စုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၁ဝဝ ထိအောင် အားလုံးတောင့်ခံနိုင်ကြလျှင် ထိုပွဲရလဒ်ကို ပယ်ဖျက်မည် ဖြစ်လေသည်။
ရေတွက်ရင်းဖြင့် ၅၀ ကျော်လာသောအခါ အားလုံးပြီးချင်လာကြပြီ … ၅၅ အရောက် သန်မြန်လေရှီးခမျာ အကြောတွေဆွဲလာပြီး ၅၈ တွင် ပြီးသွားလေတော့သည်။ အားလုံးထဲတွင် အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်၍ ထိုသို့ရှုံးနိမ့်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျန်သော သဘာနှစ်ယောက်လည်း မနေနိုင်တော့ပဲ ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် ပြီးသွားလေတော့သည်။
ရလဒ်များကို ကြေညာရာ ဖိုးရှောက်လင်က ၈၇ ဖြင့်အနိုင်ရသွားလေသည်။ လှန်ဘာဂျာ ၈၄ ဖြစ်ပြီး သန်မြန်လေရှီးတစ်ယောက်မှာ ပြတ်သားစွာ ရှုံးနိမ့်သွားလေသည်။ ဒိုင်လူကြီးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာအပြီးတွင် ပြိုင်ပွဲကို ရပ်နားကြောင်းနှင့် ညနေ ၄နာရီတွင် ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထား လေသည်။ ပရိတ်သတ်များလည်း ထိုအခါမှ ဆူညံဆူညံနှင့် ထပြန်သွားကြလေသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်အသီးသီးတို့လည်း အိမ်ပြန်ကာအနားယူကြလေသည်။
ဖိုးရှောက်လင်လည်း အိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ကြီးဆေးများ ထန်ဆေးများကို ကြိုတင်သုံးစွဲထားသည်။ စိတ်တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် တရား ထိုင်ကာ ကွမ်းတယာညက်လောက်ကြာမှ ပြန်လည်ထလာပြီး ငှက်သိုက်များကိုမှီဝဲသည်။ လှန်ဘာဂျာကား အတွင်းအားထောင်သိုင်းကို လေ့လာနေပြီး သန်မြန် လေရှီးကား ကြက်ဥသောက်ကာ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်နေလေတော့သည်။
ညနေလေးနာရီ … သူတောင်းစားဂိုဏ်း၏ကွင်းပြင် … ရာသီဥတုကား ခါးကစားသမားများအကြိုက်ဖြစ်သည်။ တိမ်အနည်းငယ်ဖုံးနေသော်လည်း အလင်းရောင်အသင့်အတင့်ရှိနေသည်။ ဒိုင်လူကြီးများက သူတို့သုံးယောက်ကို အကြောစမ်းကာ တားမြစ်ဆေးသုံးမသုံး စစ်ဆေးသည်။ ထိုခဏ ဖိုးရှောက်လင် ဆေးကျတော့သည်။ အကြောင်းကား ကြီးဆေးသုံးလာခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။ ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းကား သဘာဝလီးဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်လေသည်။ ဖိုးရှောက်လင်မှာ ဤပွဲစဉ် အတွက်သာမက ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ကိုပါ ပိတ်ပင်ခံရလေသည်။ တရုတ်မင်းများလည်း အားကစားကိစ္စတွင် တားမြစ်ဆေး သုံးစွဲမှု တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်ကြောင့် ဖိုးရှောက်လင်မှာ စံပြအနေဖြင့် အပြစ်ပေးခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ယခုတော့ နှစ်ဦးတည်းသာ ပြိုင်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်များဂိုဏ်းမှ မိန်းမများကတော့ လိုးမည့်သူ တယောက်လျော့သွားသဖြင့် လုရင်းဆွဲရင်း အချင်းချင်းထချကုန်ကြလေသည်။ ပြိုင်ပွဲ အမှတ် ၅ ဖြစ်သော ခံနိုင်ရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ပြိုင်ပွဲကို စည်းကမ်းတင်းကျပ်စွာဖြင့် ဆက်လက်ကျင်းပ လေ၏။ ဒိုင်လူကြီးများက စည်းကမ်း ချက်များကို ကြေညာလိုက်သောအခါ ပရိတ်သတ်များအားလုံး ဟင်ကနဲ ဟာကနဲ ဖြစ်ကုန်ကြလေသည်။ အကြောင်းမူကား ပြိုင်ပွဲဝင်တို့၏လီးများကို ပေပေါ်တင်၍ တူနှင့်ထုမည်ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ဒိုင်လူကြီးများမှ အချက်ပေးလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် အားကောင်းမောင်းသန် သူတောင်းစားဂိုဏ်းသားနှစ်ဦးသည် ဆယ်ပေါင်တူကြီးများကိုထမ်း၍ ပေါ်ထွက်လာကြလေသည်။ သန်မြန်လေရှီးသည် မျက်လုံးတချက်ပြူးသွားသော်လည်း ဘေးမှ လှန်ဘာဂျာက ဘာမှမဖြစ်သလိုကြည့်နေသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် ဟန်ကိုယ့်ဖို့ဆိုကာ မာန်တင်းလိုက်ပြီး ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်လေသည်။ နှစ်ယောက်စလုံးပင် လီးများကို ပေပေါ်တင်လိုက်ကြပြီး ‘‘အသင့်”ဟု အော်လိုက်ကြ လေသည်။ဒိုင်များကလည်း ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သဖြင့် ဂိုဏ်းသားနှစ်ဦးသည် တူများကို မြှောက်တင်လိုက်ကြပြီး ပေပေါ်တွင် တင်ထားသောလီးများကို အဆက်မပြတ် ထုနှက်ကြလေသည်။ တချက်ထုချလိုက်တိုင်း သံနှင့်သံထိ၍ ထွက်ပေါ်လာသကဲ့သို့ ထန်ကနဲ ထန်ကနဲ အသံများကို ကြားနေရလေသည်။ သန်မြန်လေရှီးသည် ပထမဆုံးတချက်အထုတွင် လန့်ဖြတ်ပြီး စအိုကို ကြုံ့ထားမိသော်လည်း ဒိုင်လူကြီးများက စအိုကြုံ့ခွင့်မပြုကြောင်း အော်ပြောလိုက်သဖြင့် ပြန်ဖွင့်အပေးတွင် တောင့်ထားသမျှ ပြန်လျော့သွားသဖြင့် အားကနဲအော်လိုက်မိလေသည်။ သို့သော် ထိုတချက်မှလွဲ၍ ဂိုက်ပေးမပျက်တောင့်ခံနေလေသည်။အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လီးတင်ထုနေသောပေမှာ တဖြည်းဖြည်းချိုင့်ဝင်လာပြီး ချိုင့်သွားသောနေရာထဲသို့ လီးက ဝင်သွားတဖြင့် ထုနေသူများမှ ထုမရတော့ကြောင်း ဒိုင်များအား အစီရင်ခံသဖြင့် ပေများကို အသစ်လဲပေးရသေး၏။ များမကြာမီ တူများပါ နှစ်ခြမ်းကွဲထွက်လိုထွက် ကြုံ့ဝင်လိုဝင်ဖြစ်ကုန်ကြရာ ဒိုင်လူကြီးများလည်း ပြိုင်ပွဲကို ရပ်နားကာ အားလုံး၏အကြံဉာဏ်များကို တောင်းခံပြီး သရေပွဲအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်လေသည်။ပြိုင်ပွဲကို နားကြောင်းကြေညာပြီး နောက်နေ့တွင် နေ့လည်ဘက်ပါ မရပ်မနားယှဉ်ပြိုင်ကြည့်ရှုရန်အတွက် ကွင်းကြီးကို တိုင်ထူကာ အမိုးမိုးရန် ဒိုင်အဖွဲ့မှခိုင်းလေသည်။ဂိုဏ်းသားများမတူးမီပင် သန်မြန်လေရှီးက အလိုက်တသိဖြင့် သူ၏လီးကို အသုံးပြုကာ တွင်းတူးပေးလိုက်လေသည်။ လှန်ဘာဂျာကား ပြန်သွားပြီး ဖြစ်သဖြင့် မတူးလိုက်ရပေ။ သန်မြန်လေရှီးတဦးတည်း တွင်းပေါင်း နှစ်ဆယ်ခန့်တူးပေးလိုက်သည်။ လိုအပ်သောတွင်းများ ပြည့်စုံသွားမှ သူလည်း အိမ်ပြန် နားလေသည်။
နောက်တနေ့ မနက် … ဒိုင်လူကြီးများက ကြေညာလိုက်သည်။ ယမန်နေ့က ပြီးဆုံးသွားသော ခံနိုင်ရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ပြိုင်ပွဲအတွက် ရလဒ်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ကြောင်း ကြေညာပြီး၊ သန်မြန်လေရှီးကို အနိုင်ပေးကြောင်းကို ကြေညာလိုက်လေသည်။ လှန်ဘာဂျာလည်း မကျေမနပ်ဖြင့် ဒိုင်ကော်မတီအား စောဒကတက်လေသည်။‘‘ အဘိုးကြီးတွေ ခင်ဗျားတို့က ဘာလဲဗျ … ဂိုဏ်းချုပ်သားဆိုပြီး မျက်နှာလိုက်တာလား “‘‘ ဟေ့ကောင် စကားကို ပြေပြေလည်လည်ပြော “‘‘ ကဲ … ဒါဆို သန်မြန်လေရှီးကို ဘာဖြစ်လို့ အနိုင်ပေးရတာလဲ “‘‘ အင်း ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ နာမည်ကိုရော မင်း သေချာသိရဲ့လား “‘‘ သိသားပဲ … ခံနိုင်ရည်ပြိုင်ပွဲမဟုတ်လား …”‘‘ အင်း … အဲဒီမှာ စတွေ့တာပဲ “‘‘ ဘာလဲ အဘိုးကြီး ရှင်းအောင်ပြောဗျာ “‘‘ ပြိုင်ပွဲရဲ့နာမည်က ခံနိုင်ရည်နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပြိုင်ပွဲကွ … မင်း တယ်ညံ့တာပဲ “‘‘ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်တုန်း “‘‘ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ကွ။ မနေ့ညနေက ပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့အထိ မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ရလဒ်တွေက တူတူပဲ။ သန်မြန် လေရှီးကို အနိုင်ပေးရတဲ့အကြောင်းကတော့ မနေ့က ကွင်းကို အမိုးမိုးဖို့ကိစ္စမှာ တွင်းတူးဖို့ကို သန်မြန်လေရှီးက တာဝန်ယူသွားလို့ပဲ … မှတ်ထားလိုက် ”‘‘ တွင်းတူးတာများဗျာ … အတွင်းအားနဲ့ ရိုက်လိုက်ဖြစ်တာပဲ ”‘‘ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးကွ … ဟိုကောင်က လီးနဲ့တူးသွားတာ …”‘‘ အင်းလေ မသိလို့ခံလိုက်ရတာပဲဗျာ … နောက်ပွဲကိုတော့ နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ် …သြော် အဘ ညကျရင် အိမ်လာခဲ့မယ်နော် …”လှန်ဘာဂျာလည်း သန်မြန်လေရှီးကို မသမာသောနည်းလမ်းဖြင့် အနိုင်ယူရန် ပြင်ဆင်နေလေတော့သည်။
*အောလောကတွင် အောလောကသားတိုင်း မက်မောတောင့်တသော အောလောက ရတနာသုံးပါးရှိလေသည်။ ကြိုက်ကုန်းတောအုပ်မှာ အဆိုပါ ရတနာသုံးပါးမှ တပါးအပါအဝင်ဖြစ်လေသည်။ ကျန်ရတနာ နှစ်ပါးမှာ မာကြီးကြာ သိုင်းကျမ်းနှင့် ကျောက်ချဉ်ဝိညာဉ်ဓါး တို့ဖြစ်ပေသည်။မာကြီးကြာသိုင်းကျမ်းမှာ အောလောကလုလင်ပျိုတို့ အငမ်းမရ အလိုရှိသော ကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်၍ ကျောက်ချဉ်ဝိညာဉ်ဓါးမှာမူ အောလောကသမီးပျိုတို့ မက်မောသောဓါးတစ်လက်ဖြစ်ပေတော့သည်။၄င်းအပြင် အဆိုပါရတနာသုံးပါးမှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်တည်ရှိ လျက်ရှိသည်ဟု အောလောက ဒဏ္ဍာရီများက ဆိုလေသည်..။ထင်ရှားသောဒဏ္ဍာရီတစ်ခုမှာ ကြိုက်ကုန်းတောအုပ်အတွင်းရှိ ကြိုက်ကုန်းဒေဝီထံတွင် မာကြီးကြာသိုင်းကျမ်းရှိ၍ ကျောက်ချဉ်ဝိညာဉ်ဓါးမှာမူ ကြိုက်ကုန်း ဒေဝီ၏ ကြင်ယာတော် အဖုတ်ကျွန်းသခင်ကြီး ထံတွင်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်..။ ၄င်းတို့မှာ အောလောက၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဇနီးမောင်နှံများဖြစ်သော်လည်း အတူမနေကြပေ။ ကြိုက်ကုန်းဒေဝီမှာ ကြိုက်ကုန်းတောအုပ်တွင် ကြိုက်တာတွေ့လျှင် ကုန်းနေသလို အဖုတ်ကျွန်းသခင်ကြီးမှာလည်း အဖုတ်ကျွန်းတွင် ပျော်မွေ့နေလေသည်။ သို့သော် နှစ်စဉ်အောလောကချစ်သူများနေ့ ရောက်တိုင်း ၄င်းတို့ဇနီးမောင်နှံ တွေ့ဆုံလိုးကြလေ့ရှိသည်ဟု သိုင်းလောကတွင် သတင်းကြီးသည်..။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံလိုးကြလေတိုင်း ကြိုက်ကုန်းဒေဝီသည် သူမ၏လင်တော်မောင်အတွက် မာကြီးကြာသိုင်းကျမ်းပါ နည်းလမ်းများဖြင့် ပြုစုသလို အဖုတ်ကျွန်းသခင်ကြီးမှာလည်း ကျောက်ချဉ်ဝိညာဉ်ဓားအစွမ်းဖြင့် ကြိုက်ကုန်းဒေဝီ၏ ကြိုက်တိုင်းကုန်းစောက်ဖုတ်ကြီးအား အကျဉ်းအကျယ် လိုသလိုစီမံလေ့ရှိသည်ဟု အောလောကဒဏ္ဍာရီများက ဆိုလေသည်။ ထို့ကြောင့် အပယ်ခံဖိုးရှောက်လင်မှာ ကြီးဆေးသုံးရန်မလိုသော မာကြီးကြာသိုင်းကျမ်းပါ သိုင်းကွက်များကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်အလို့ငှာ ကြိုက်ကုန်း တောအုပ်သို့ စွန့်စားရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတော့သည်..။မိမိအား အရှက်တကွဲ အပြစ်ပေးဒဏ်ခတ်ခဲ့သော အောလောကဂိုဏ်းချုပ်ကြီးများအား လက်စားချေချင်စိတ် ပြင်းပြနေသောကြောင့်သာ ကြိုက်ကုန်း တောအုပ်သို့ ထွက်လာခဲ့ရသော်လည်း ဖိုးရှောက်လင်စိတ်ထဲတွင်မူ အတော်ပင် လေးလံလျက်ရှိပေသည်..။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကြိုက်ကုန်းဒေဝီ၏ စည်းကမ်းချက်သုံးချက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်လေတော့သည်..။ ကြိုက်ကုန်းတောအုပ်သို့ ဝင်ရောက်လာသော မည်သည့်အောလောကသား မဆို အဆိုပါစည်းကမ်းသုံးချက်ကို တသွေမတိမ်းလိုက်နာရလေသည်..။ အရှည်ရှစ်လက်မ လုံးပတ်ရှစ်လက်မခွဲရှိရမည်ဆိုသော ပထမစည်းကမ်းချက်ကို ဖိုးရှောက်လင် မမှုသော်လည်း ဒုတိယစည်းကမ်းချက်နှင့် တတိယ စည်းကမ်းချက်များကိုတော့ ဖိုးရှောက်လင်တွေးပူနေလေသည်..။ ဒုတိယစည်းကမ်းချက်မှာ ကြိုက်ကုန်းဒေဝီ၏ သမီးများနှင့် ပညာပြိုင်ခန်းဖြစ်လေသည်..။ ကြိုက်ကုန်းဒေဝီတွင် အမွှာသမီးနှစ်ယောက်ရှိပေသည်..။ အကြီးမမှာ လီးမြင်ပြုံးဟုနာမည်တွင်၍ အငယ်မအား လီးမြင်ပျော်ဟု အောလောကသားတို့က ခေါ်ဆိုကြလေသည်..။ကြိုက်ကုန်းတောအုပ်သို့ လာရောက်ကြသော အောလောကသားတို့မှာ ပထမစည်းကမ်းချက်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြသော်လည်း လီးမြင်ပြုံး လီးမြင်ပျော် ညီအမနှစ်ယောက်နှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့တိုင်း အရှုံးပေးကြရလေသည်..။ ထို့ကြောင့် တတိယစည်းကမ်းချက်ဖြစ်သော ကြိုက်ကုန်းဒေဝီနှင့် ပညာပြိုင်ခန်းကို မည်သည့်အောလောကသားမျှ မကြုံဖူးသေးပေ..။ဖိုးရှောက်လင်စိတ်ပူမည်ဆိုလျှင်လဲ စိတ်ပူစရာပေ..။ လီးမြင်ပြုံး လီးမြင်ပျော် ညီအမနှစ်ယောက်မှာ ငယ်စဉ်ကတည်းက လီးမျိုးစုံနှင့် လေ့ကျင့်ယဉ်ပါးခဲ့ကြ လေသည်။ မိခင်ဖြစ်သူ ကြိုက်ကုန်းဒေဝီနှင့် ဖခင်ဖြစ်သူ အဖုတ်ကျွန်းသခင်ကြီးတို့ကလည်း ၄င်းတို့မွေးနေ့ရောက်တိုင်း လီးမျိုးစုံကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလေ့ရှိသည်ဟု အောလောကတွင် သတင်းမွှေးလှသည်..။သို့သော် လက်စားချေလိုစိတ် ပြင်းပြနေသော ဖိုးရှောက်လင်မှာ တောင်တောင်အီအီမတွေးတော့ဘဲ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်သဘောပိုက်ကာ ကြိုက်ကုန်းတောအုပ် အဝင်ဝသို့ သူ၏စီးတော်လားကြီးအား အပြင်းနှင်ခဲ့လေတော့သည်..။ အရေးထဲ ကြိုက်ကုန်းတောအုပ်အဝင်နှင့် လီနှစ်ဆယ်ပျော့ပျော့အကွာအဝေးတွင် စီးတော်လား ပေကပ်ကပ်လုပ်နေသောကြောင့် ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့ရ သေးသည်။ ဖိုးရှောက်လင်၏ စီးတော်လားမှာ အတော်စီး၍ကောင်းသော လားဖြစ်သော်ငြား ဉာဉ်ဆိုးတစ်ခုရှိလေသည်။ ၄င်းမှာ ခရီး လီနှစ်ဆယ်ပေါက်တိုင်း ဂွင်းထု ပေးရခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။ ဂွင်းမထုပေးပါက မည်သို့ခြိမ်းခြောက်ရိုက်နှက်သည်ဖြစ်စေ ရှေ့ဆက်မသွားဘဲ အတင်းပေကပ်နေတတ်လေသည်..။ ယခုလဲ ဖိုးရှောက်လင်မှာ ကြိုက်ကုန်းတောအုပ်သို့ နေမဝင်ခင်ရောက်ချင်သောကြောင့် လားပေါ်မှ ကပျာကယာဆင်းခါ အောင့်သက်သက်နှင့် သူ၏ စီးတော်လားအား ဂွင်းထုပေးနေရတော့သည်..။ လက်နှစ်ဖက်နှင့် ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဂွင်းထုပေးပြီးနောက် လက်တောင်မဆေးတော့ဘဲ ဖိုးရှောက်လင်မှာ စီးတော်လားအား ခွာသံပြင်းပြင်းနှင့် ဒုန်းစိုင်းခဲ့တော့သည်။
ခွပ်ခွပ် .. ခွပ်.. ခွပ်.. ခွပ်… ဂွင်းတခါတိုက်ခန့် အကြာတွင်မူ အောလောက၏နာမည်ကျော် ကြိုက်ကုန်းတောအုပ်အဝင်ဝသို့ ဖိုးရှောက်လင်တစ်ယောက် ရောက်ရှိသွားတော့သည်။ ဖိုးရှောက်လင်မှာ လားပေါ်က မဆင်းဘဲ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ ကြိုက်ကုန်းတောအုပ်အဝင်ဂိတ်ပေါက်ကြီးအား မှင်သက်မိစွာ ငေးကြည့်နေမိလေသည်..။ ဂိတ်ပေါက်ကြီးမှာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှပေသည်။ လက်ရာမြောက်စွာထုလုပ်ထားသော လီးပန်းပုရုပ်ကြီး အကြောပြိုင်းပြိုင်းထလျက် လေအဝေ့မှာ ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်ဖြစ်နေသည်မှာ အတော်ပင်ကဗျာဆန် ရသမြောက်လှတော့သည်။“ ကြိုက်ကုန်းတောအုပ်မှ သင့်အား ကြိုဆိုပါ၏ ”ဆိုသည့် စာတမ်းကြီးမှာလည်း လီးပန်းခက်လီးပန်းနွယ် အဖုတ်ပန်းခက်အဖုတ်ပန်းနွယ်များဖြင့် မျက်စိ ပသာဒ ဖြစ်လှပေသည်..။ “ သြော် … ဒါကြောင့်လည်း ကြိုက်ကုန်းတောအုပ်လို့ နာမည်ကျော်ပေတာပဲ ”ဟု ဖိုးရှောက်လင်မှ တီးတိုးရွတ်ရင်း သူ၏လားကြီးပေါ်မှ ခုန်ဆင်း လိုက်လေတော့သည်။ ထို့နောက် စီးတော်လားအား ဆွဲပြီး တောအုပ်အတွင်းသို့ သတိကြီးစွာထားလျက် ဝင်ရောက်ခဲ့ရာ စောက်ဖုတ်ပုံသဏ္ဍာန်ရေအိုင်တစ်ခုအနီးတွင် အောက်ပါ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကို တွေ့ရလေတော့သည်။
ထို့နောက် ဆဋ္ဌမမြောက်ပြိုင်ပွဲအဖြစ် အမှုတ်ပြိုင်ပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပသည်။ ပြိုင်ပွဲ၏ Official Partner ဖြစ်သော အမျိုးသမီးဂိုဏ်းမှ ဗော်လံတီယာနှစ်ဦး စေလွှတ်ကူညီသည်။ ဗော်လံတီယာများကား ကွင်းထဲရောက်လျှင် ဆံပင်ကျွတ်သူကျွတ်၊ ကုတ်ရာခြစ်ရာ လက်သည်းရာထင်သူထင်ဖြစ်နေသဖြင့် တာဝန်ရှိသူ သူတောင်းစားလူကြီးမင်းများမှ စုံစမ်းရာ အားလုံးထင်ထားတော်မူကြ သည့်အတိုင်း အလုအယက်ထွက်လာကြရသောကြောင့်ဟု သိရလေသည်။ ကွင်းအတွင်း နိုင်ငံတော်သီချင်းကို သီဆိုပြီးနောက် ကစားသမားများ ဝင်ရောက်နေရာယူကြလေသည်။ ပရိသတ်များ၏ အားပေးသံကား ဆူညံတက်ကြွ နှစ်ဖက်မျှပါပေသည်။ သန်မြန်လေရှီး နိုင်ရမည် … အင် လှန်ဘာဂျာ ဝီထရပ်စ် … စသည်ဖြင့် …။ ဝင်ရောက်လာသော ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးတို့သည် သူတို့အသုံးချရမည့် မိန်းမနှစ်ဦးအား ကြည့်လိုက်ရုံမျှဖြင့် ပန်းသေမတတ်ဖြစ်သွားကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုမိန်းမများကား ပုံမလာပန်းမလာ စုတ်ပြတ်နေသည့်အဖြင့် အသက်အရွယ်အားဖြင့်လည်း လေးငါးဆယ်ခန့်ဖြစ်နေသောကြောင့်တည်း။ ပြောရလျှင် သန်မြန်လေရှီးထက် လှန်ဘာဂျာကမူ အနည်းငယ်သာလေသည်။ သူ့အတွေ့အကြုံအရ ဒီ့ထက် စုတ်ပြတ်သည်များနှင့်လည်း ဇာတ်လမ်း ရှိခဲ့ပြီး သန်မြန်လေရှီးမှာမူ ဗိုလ်ချုပ်သား အဲလေ … ဂိုဏ်းချုပ်သားဖြစ်လေသဖြင့် တတ်နိုင်သမျှ အငယ်အလန်းများဖြင့်သာ ကြုံတွေ့ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဒိုင်လူကြီးများမှ အချက်ပေးလိုက်ရာ သန်မြန်လေရှီးလည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် အတွင်းအားကိုပါးစပ်တွင်စုကာ အဝေးမှလှမ်းပြီးမှုတ်လေသည်။ ခံနေသောမိန်းမကား မျက်လုံးများအရောင်တောက်လာသော်လည်း ငါးမိနစ်ခန့်အကြာတွင် ဟောက်သံများထွက်လာကာ အိပ်ပျော်သွားတော့သည်။ သူလည်း ပါးစပ်ညောင်းညောင်းဖြင့် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ထိုင်ချလိုက် လေတော့သည်။ ဒိုင်များက ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် တိုက်တွန်းသော်လည်း ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တော့သည့်အတွက် သူလည်း လက်မြှောက်ကာနေလိုက်လေသည်။ထိုခဏတွင် အမှုတ်ဆရာ လှန်ဘာဂျာသည် သူ၏ကျော်ကြားလှသော မုန်တိုင်းတထောင်လေသိုင်းကိုသုံးကာ သူ၏ သိုင်းကျမ်းထဲမှ ၃၀၁၂ဝဝရ ခုမြောက် အကွက်ဖြစ်သည့် ဝိညာဉ်နှုတ်လျှာ အမှုတ်ဆရာ အမည်ရှိသော သိုင်းကွက်ကိုသုံး၊ ပါးစပ်ထဲသို့ အတွင်းအားကိုပို့ထားလိုက်ပြီး ပေငါးဆယ်အကွာအဝေးသို့ပင် လျှောက်သွားလိုက်ပြီး အစွမ်းပြလေသည်။အမှုတ်ခံနေရသော အမျိုးသမီးသည် ဓာတ်လိုက်သည့်နှယ် တကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်နေပြီး သူ့ကိုတင်ထားသည့် စားပွဲပေါ်တွင် လှုပ်ခါနေလေသည်။ ထိုမိန်းမ၏စောက်စိကို အဝေးမှနေကာ လျှာပေါ်မှ အတွင်းအားလှိုင်းကို ပို့လွှတ်ပြီး လှမ်းကလိလိုက်သည့်အခါမျိုးတွင် အော်သံကြီးက နားကွဲမတတ် ထွက်လာ လေသည်။ လှန်ဘာဂျာသည် သူ၏ သိုင်းကွက်များထဲမှ အကောင်းဆုံးသိုင်းကွက်များကို ရွေးချယ်ထုတ်နှုတ်၍ ပရိတ်သတ်များအားဖျော်ဖြေနေသည်။သန်မြန်လေရှီးသည် ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အခြေအနေများကို သုံးသပ်ပြီး သူရှုံးတော့မည်ကို ခန့်မှန်းမိသဖြင့် ဒိုင်များအား ခွင့်တောင်းကာ ကျေကျေနပ်နပ် အရှုံးပေးလိုက်လေတော့သည်။ ဒိုင်များက သန်မြန်လေရှီးအရှုံးပေးကြောင်း ကြေညာသော်လည်း လှန်ဘာဂျာကမူ မှုတ်ကောင်းတုန်းရှိနေသေးသည်။ ထုံးစံအတိုင်း ထိုမိန်းမအား အချီချီပြီးအောင်မှုတ်ပေးပြီးမှ ပရိတ်သတ်များဖက်သို့လှည့်ကာ ‘‘အမှုတ်ပညာ ငါဆရာ” ဟုကြွေးကြော်လိုက်လေတော့သည်။
ထိုနေ့ညတွင် ချိန်းထားသည့်အတိုင်း ဒိုင်ကော်မတီအကြီးအကဲထံသို့သွားရောက်ပြီး မနက်ဖြန်ပြိုင်ပွဲတွင် သူ့အား မျက်နှာသာပေးရန်အတွက် ဖင်ကုန်း တောင်းပန်ကာ ရွှေငါးမူးသားပေး၍ လာဘ်ထိုးလေသည်။ ဒိုင်လူကြီးက လှန်ဘာဂျာအား နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲ၏ လျှို့ဝှက်အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများကို မခြွင်းမချန် ပြောပြလိုက်ရာ လှန်ဘာဂျာလည်း ချက်ချင်းအိမ်ပြန်ပြီး နောက်နေ့ပြိုင်ပွဲအတွက် လေ့ကျင့်တော့သည်။ စည်းကမ်းကား ပိုအော်အောင်ချနိုင်သူအား အနိုင်ပေးမည်ဟု ဖြစ်လေသည်။သန်မြန်လေရှီးမှာမူ ရိုးသားသဖြင့် ကြက်ဥနှင့် ရုံးပတီသီးကိုသာ အဝစားပြီး အိပ်စက်ရန်ပြင်ဆင်သည်။ မအိပ်ခင်တွင် သူ့အား ခင်မင်ကြည်ညို လေးစားသော ဂိုဏ်းဝင်တဦးမှ ကိုးကွယ်ရန်ပေးထားသော လီးဘိုးတော်ရုပ်ထုအား ကန်တော့ပြီးမှ အိပ်ရာပေါ်လှဲချလိုက်လေသည်။ ချက်ချင်းအိပ်မပျော်သေးဘဲ မျက်စိကြောင်နေသဖြင့် ဖိုက်ဝမ်းဆွဲလိုက်မှ အိပ်ပျော်သွားသည်။အိပ်မက်ထဲတွင် သူကိုးကွယ်သော လီးဘိုးတော်နှင့်တွေ့လေသည်။ အိပ်မက်ထဲဆိုသော်လည်း စကားအခြေအတင် ဆွေးနွေးကြလေသည်။ လီးဘိုးတော်က …‘‘ အိုမီတိုဖာ … ယောကျာ်းလေးအားလုံး လီးကြီးပြီး ကျန်းမာကြပါစေ “ ဟု မေတ္တာပို့လေရာ သန်မြန်လေရှီးက…‘‘ ဘိုးတော်ကြီးခင်ဗျာ … ဘိုးတော်ကြီးက ဘယ်သူပါလဲ … ဒီကို ဘာလာလုပ်တာလဲ “‘‘ အိမ်း … ငါက လီးဘိုးတော်ပဲ … မင်းမအိပ်ခင်က ငါ့ကိုရှိခိုးပြီး ဆုတောင်းလို့ ငါပေါ်လာရတာ “‘‘ အား … တွေ့ရတာ သိပ်ဝမ်းသာတယ် ဘိုးတော် “‘‘ ကောင်းပြီ လူငယ်လီးကြီးကလေး …”‘‘ ဘိုးတော် မနက်ဖြန် ကျွန်တော် ပြိုင်ပွဲဝင်ရမှာ သိသလားခင်ဗျာ …”‘‘ အေး အဲဒါကြောင့် မင်းကို ဒီပစ္စည်းလေးပေးမလို့ကွ … ရော့ ယူထားလိုက် “ ဟုဆိုကာ ပျောက်ကွယ်သွား လေသည်။ သန်မြန်လေရှီးလည်း လန့်နိုးလာပြီး လက်ထဲတွင် အရာဝတ္တုတခုကိုစမ်းမိသဖြင့် ကြည့်လိုက်ရာ ကတ္တီပါအိတ်တခု၊ အထဲတွင်တော့ မည်းတူးနေသော အပ်တုံးကြီးတချောင်း။ စိတ်ရှုပ်ရှုပ်ဖြင့် ပြန်အိပ်လိုက်ပြီး မနက်လင်းကြက်တွန်မှ မနည်း အိပ်ရာထရလေသည်။သူလည်း ဝတ်စုံများကို သေသေသပ်သပ်ဝတ်ကာ မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက်၊ ဂွင်းတိုက်ပြီး မနက်စာစားကာ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ ကွင်းပြင်ဆီသို့ ထွက်လာ ခဲ့တော့သည်။ ကွင်းထဲတွင်မတော့ ပရိတ်သတ်များအားလုံး နေရာယူပြီးနေကြပြီ။ နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲနေ့ဖြစ်သဖြင့် လက်မှတ်မှောင်ခိုဈေးကလည်း ကြီးမြင့်လှသည်။ သို့သော် အားလုံး အိုးပစ်အိမ်ပစ်လာကြရာ သူခိုးများအကြိုက်ပင်ဖြစ်နေလေသည်။များမကြာမီ လှန်ဘာဂျာရောက်လာပြီး လိုက်လံနှုတ်ဆက်နေလေသည်။ သူကား သူသာ အနိုင်ရရမည်ဟု ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် ဝင်းထိန်ပြောင်လက် နေသော မျက်နှာကြီးကို ဖြီးနေလေသည်။ ထို့နောက် ပြိုင်ပွဲကို သန်မြန်လေရှီး တွင်းတူးပေးထားသော မိုးလုံလေလုံ အားကစားရုံကြီးတွင် ကျင်းပလေတော့သည်။ ဒိုင်များက ပြိုင်ပွဲဝင်များ စိတ်ကြိုက်စွမ်းရည်ကို ပြရန် ကြေညာကာ စိတ်ကြိုက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တော့သည်။ ပြိုင်ပွဲမှာ မနက်ပိုင်းတချိန်သာ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ပွဲစသည်နှင့်တပြိုင်နက် လှန်ဘာဂျာသည် မိန်းမများဘက်သို့ လက်ဝှေ့ရမ်းပြကာ သူ့အတွက်ပေးထားသော မိန်းမကို အသာအယာချော့ထည့်လိုက် လေသည်။ မိန်းမပရိတ်သတ်များ ကျေနပ်သွားကြပြီး အားရင် သူ့ဆီလာကုန်းဦးမှ ဆိုသော အတွေးများ ပေါ်ထွက်လာကြလေသည်။ ပွဲစပြီး ငါးမိနစ်လောက်အထိ အသာအယာသာ ကြိတ်လိုးနေလိုက်သည်။ အင်အားကို ချိုထားပြီး သန်မြန်လေရှီးကဲ့သို့ မနူးမနပ်ကောင်ကို အနိုင်ရရေးအတွက် ပြင်ဆင်နေလေသည်။သန်မြန်လေရှီးမှာ အဖေ၏အရိုက်အရာကိုထိန်းသိမ်းရန် စိတ်အားထက်သန်နေသော်လည်း လှန်ဘာဂျာကဲသို့ ဘဝအတွေ့အကြုံ မကြွယ်ဝသဖြင့် စိတ်အားငယ်နေမိလေသည်။ အားရပါးရဆောင့်လိုးရင်း အားငယ်မှုများကို ဖြေဖျောက်နေရလေတော့သည်။ သို့သော် သူ၏လီးကား အားမငယ်၊ အမုန်းထောင်မတ် နေလေတော့သည်။ အချိန်အနည်းငယ်အကြာတွင် လှန်ဘာဂျာသည် အင်အားကို အစွမ်းကုန်အသုံးပြုကာ ဆောင့်ချလေရာ မိန်းမဆီမှ အော်သံများ အဆက်မပြတ် ထွက်လာတော့သည်။ သူလည်း လိုးနေရင်းဖြင့် ဒိုင်လူကြီးများဘက်သို့ မျက်စိကစားလိုက်လေရာ မနေ့ညက လာဘ်ပေးထားသော ခေါင်းဆောင်ဒိုင်နှင့် မျက်လုံးချင်း ဆုံရာ ဒိုင်လူကြီးက မသိမသာ လက်မထောင်ပြလေသည်။ လှန်ဘာဂျာသည် နွားသိုးအတွင်းအားကို သူတီထွင်ထားသော ‘‘လုံးပတ်တုတ်ကြီး ငါ့ကွမ်းသီး” သိုင်းဖြင့် ပေါင်းစပ်သုံးစွဲကာ ခံနေသောမိန်းမ ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင် ခုန်ခုန်ပြီးလိုးတော့သည်။ မိန်းမက အော်လေလေ နိုင်ရမည်ဆိုသောစိတ်က တွန်းအားပေးလေလေဖြင့် အမုန်းလိုးလေရာ အော်သံများမှာ နားမခံသာအောင်ထွက်နေလေသည်။ တဘွတ်ဘွတ် တဖတ်တဖတ်ဖြင့် စည်းချက်ညီညီထွက်ပေါ်နေသော အသံများအောက်တွင် သန်မြန်လေရှီးက ငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက်ဖြင့် အားရှိသလောက်ထုတ်ပြီး ကျုံးလျက်ပင် …။သန်မြန်လေရှီးသည် တက်ကြွသော လှန်ဘာဂျာ၏အမူအရာကို ပြိုင်ပွဲမစခင်ကတည်းက မသင်္ကာဖြစ်နေလေသည်။ သို့သော် စိတ်ထင်တာပဲဖြစ်မည်ဟု ခဏမေ့ထားလိုက်သည်။ ပြိုင်ပွဲထဲသို့ရောက်မှ သေသေချာချာ အကဲခတ်သော် ဒိုင်နှင့် လှန်ဘာဂျာတို့ မျက်စပစ်ပြနေကြသည်ကို အမှတ်မထင်တွေ့လိုက်ရလေမှ သူ၏ သံသယစိတ်များ ပိုမိုကြီးထွားလာပြီး လှန်ဘာဂျာ အသံထွက်အောင်လိုးနေသည်မှာ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းပင်ဖြစ်ရမည်ဟု တွေးမိလေတော့သည်။ သန်မြန်လေရှီး အမုန်းလိုက်ကျုံးသော်လည်း လှန်ဘာဂျာလောက်မတတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေလေသည်။အားကုန်ထုတ်ကာလိုးပါသော်လည်း လှန်ဘာဂျာလောက် အသံမထွက်ဖြင့် နည်းလမ်းစဉ်းစားနေလေသည်။ ထိုအခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ‘‘စောက်သုံး မကျတဲ့လီး”ဟုဆဲကာ စဉ်းစားရင်းမှ လီးဟူသော စာလုံးနှင့်အတူ လီးဘိုးတော်ကိုသတိရမိလေသည်။ သူလည်း ညစ်မှရတော့မည်ကို သိသွားပြီး လီးဘိုးတော် ပေးထားသောအပ်ကို သူ၏ကွမ်းသီးဘေးတွင် သားရေကွင်းနှင့်တွဲ၍ ချည်နှောင်ထားလိုက်လေတော့သည်။ ထို့နောက် ခပ်သာသာလေးစမ်းလိုက်ရာ သူလိုးနေသော မိန်းမမှာ မျက်ဖြူလန်မတတ် စူးစူးဝါးဝါးအော်ကာ တွန့်လိမ်သွားလေသည်။ လှန်ဘာဂျာပင် မနေနိုင်တော့ပဲ လှည့်ကြည့်ရလေသည်။သန်မြန်လေရှီးလည်း ‘‘ခြေသလုံးပလွေရိုးနဲ့ တနေ့လုံးအသေလိုးမယ်”ဟု ကြွေးကြော်လိုက်ပြီး ခပ်မှန်မှန်ပင်လိုးလေရာ အော်သံများက ဘဝဂ်လျှံအောင် ထွက်လာတော့သည်။ အပ်စူးသဖြင့် စောက်ဖုတ်ထဲမှ ဝေဒနာကို မခံစားနိုင်တော့၍ သူလိုးနေသော မိန်းမသည် သတိလစ်သွားလေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် အရန်ထားသောအထဲမှ တယောက်ကို ထပ်ခေါ်ပြီး သူလည်း စိတ်ရှိလက်ရှိလိုးပြန်လေသည်။ အပ်၏ထိုးနှက်ချက်ကြောင့် ထိုမိန်းမသည်လည်း လောကကြီးနှင့် အဆက်ပြတ်သွားပြန်သည်။ နောက်ထပ် ထပ်ခေါ်မည်ပြုသောအခါမှ ဒိုင်လူကြီးများလည်း သူတောင်းစားဂိုဏ်း နာမည်ပျက်စိုးသဖြင့် ပြိုင်ပွဲကိုရပ်နားကာ သန်မြန် လေရှီးကို အနိုင်ပေးလိုက်ရလေတော့သည်။သန်မြန်လေရှီးလည်း လီးဘိုးတော်ပေးထားသောအပ်ကို သေချာသိမ်းဆည်းကာ ဘဝတလျှောက်လုံး လီးဘိုးတော်ကို ကိုးကွယ်တော့မည်ဟု စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေတော့သည်။ ဒိုင်များက သန်မြန်လေရှီးအား ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားကြပြီး သူတောင်းစားဂိုဏ်း၏ ဂိုဏ်းချုပ်သစ်အဖြစ် တင်မြှောက်လိုက်ကြ တော့သည်။ ထို့နောက် နေ့လည်စာဖြင့် ဖိတ်ကြားထားသူများအား တည်ခင်းဧည့်ခံလေသည်။ နေ့လည်စာစားပွဲတွင် လှန်ဘာဂျာက မိမိသည် သိုင်းလောကထဲမှ နှုတ်ထွက်ကြောင်း၊ ရှေ့လျှောက်ပြီး အမှုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့် အလိုးလုပ်ငန်းကို ထူထောင်ကာ စီးပွားရှာပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းနေတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ရာ အားလုံးအံ့ဩသွားကြပြီး မိန်းမများကမူ ဝမ်းသာသွားကြလေသည်။အားလုံး စားသောက်အပြီးတွင် ဂိုဏ်းချုပ်သစ် သန်မြန်လေရှီးက ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလေသည်။ သူက ဂိုဏ်းချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ဝမ်းမြောက် မိကြောင်း၊ ပြိုင်ဘက်ကောင်းကြီးဖြစ်သော လှန်ဘာဂျာကို အလွန်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ အနားယူတော့မည်ဖြစ်၍ စိတ်မကောင်းကြောင်း၊ ရှေ့ဆက်ပြီး သူတောင်းစား ဂိုဏ်းကြီးကို တိုးတက်ကြီးပွားအောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့်ပြောကြားပြီး နိဂုံးချုပ်ရန် ပြင်ဆင်လိုက်စဉ် သူ့ဘောင်းဘီအောက်မှ လီးကြီးက ထောင်ထွက်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရလေသည်။ ကြိုးစားဖုံးကွယ်သော်လည်း မရသဖြင့် …‘‘ အဟဲ အခုကျွန်တော် ထမင်းစားပြီးပြီလေ …အဲဒီတော့ သူတောင်းစားထမင်းဝရင် လီးတောင်တယ်လို့ မှတ်ထားလိုက်ကြပေါ့ဗျာ ”ဟု ပြောရင်း နိဂုံးချုပ်ကာ သူတောင်းစားဂိုဏ်းချုပ်အဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်လေတော့သည်။
ဖိုးရှောက်လင် မြင်တွေ့လိုက်ရသော ဆိုင်းဘုတ်မှာ …“ ဤနေရာမှ ကျော်လွန်၍ လီးမတောင်လျှင် ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်မပြု ”အထက်ပါဆိုင်းဘုတ်အား ဖတ်ရင်း ဖိုးရှောက်လင်ပြုံးလိုက်လေသည်။ စိတ်ထဲတွင်လည်း ဖိုးရှောက်လင်များ ဘာမှတ်နေလဲ၊ မွေးကတည်းက လီးတောင်ပြီး မွေးလာတဲ့ကောင်ကွဟု ကြိမ်းဝါးလျက် ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်လိုက်လေတော့သည်။ ၄င်းနောက် ခါးကော့ရင်မော့လျက် လီးကြီးတရမ်းရမ်းဖြင့် ဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့ရာ ဂွင်းနှစ်ခါထုခန့်ကြာသောအချိန်၌ ဇရပ်တစ်ဆောင်နားသို့ ရောက်ရှိ လာလေသည်..။ ဇရပ်၏အတွင်းတွင်ကား အင်မတန်ချောမွေ့လှပသော မိန်းမပျိုတစ်ယောက် ကိုယ်လုံးတီးဖြင့် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လျက် ရှိနေပေသည်။ ဖိုးရှောက်လင်လည်း သတိကြီးစွာထားလျက် ဇရပ်ပေါ်သို့ တလှမ်းချင်းတက်ကာ အဆိုပါမိန်းမပျိုနှင့် လီးနှစ်ပြန်အကွာအဝေးတွင် အသင့်အနေထားဖြင့် ခြင်္သေ့ထိုင် ထိုင်ချလိုက်သည်။သားကောင်နံ့ရသော မြွေဟောက်ပါးပျဉ်းကဲ့သို့ ဖြစ်နေသော ဖိုးရှောက်လင်၏လီးကြီးအား မျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးရင်း မိန်းမပျိုမှ …“ အကို့ဟာတော့ ကြိုက်သွားပြီ”ဟု ပြောလေသည်။ ထိုအခါ ဖိုးရှောက်လင်မှ … “ ကဲ … ကြိုက်ရင် ကုန်းတော့”ဟု ခပ်ပြတ်ပြတ် လိုရင်းပြောချလိုက်လျှင် … မိန်းမပျိုလေးမှ … “ လွယ်မယ်ထင်ထားလား … လွယ်မယ်ထင်လို့လား …”ဟု စည်သူလွင်စတိုင်နှင့် မခိုးမခန့် သီချင်းဆိုရင်း သူမ၏စောက်ဖုတ်အား ဖြဲပြလေသည်။ (မှတ်ချက်။ ။ စည်သူလွင်မှာ နာမည်ကြီး တရုတ်နန်းတွင်းအဆိုတော်ဖြစ်လေသည်။) ထိုမိန်းမပျို၏ မထေမဲ့မြင် အမူအရာကြောင့် ဖိုးရှောက်လင်မှာ လူရောလီးရော ဒေါသထွက်လာတော့သည်။ ထို့ကြောင့် … “ ဟ … နင်တို့ ကြိုက်ကုန်းဂိုဏ်းက ကြိုက်ရင် ကုန်းတာပဲ မဟုတ်လား … အခု ငါ့ဟာကို နင်ပဲ ကြိုက်တယ်ပြောတာ … ဒါကြောင့် ကုံးခိုင်းနေတာဟဲ့”ဟု ပြောချလိုက်တော့သည်။ ထိုအခါ မိန်းမပျို၏ မချိုမချဉ်မခိုးမခန့်မျက်နှာတွင် ဒေါသအရိပ်အယောင်များ ယှက်သန်းသွားပြီးလျှင် … “ အံမယ် ကျွန်မကိုများ ကြိုက်ရင် ကုန်းတာပဲတဲ့ … ဘယ်လိုအစားများ ထင်နေလဲ … ကျွန်မက မကြိုက်လဲ ကုန်းတယ်။ ဟွန့် … လူကိုများ မှိုချိုးမျှစ်ချိုး သူမို့ ပြောရက်တယ်” ဟု ပြန်ပြောလိုက်လေသည်။ ထိုအခါမှ ဖိုးရှောက်လင်လည်း မိန်းမပျို၏ စကားပရိယာယ်ကြွယ်ဝပုံကို သဘောပေါက်သွားကာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ဒရွတ်ဆွဲသိုင်းကွက်ဖြင့် ဖင်ဒရွတ် ဆွဲလျက် မိန်းမပျိုရှိရာသို့ တရွေ့ရွေ့ ချဉ်းကပ်သွားလေသည်။ မိန်းမပျိုကလဲ ခေသူမဟုတ်။ ဖိုးရှောက်လင်ကဲ့သို့ ဖင်ဒရွတ်ဆွဲသိုင်းကွက်ဖြင့်ပင် နောက်ဆုတ်သွားလေသည်။ ဖိုးရှောက်လင်လည်း သိုင်းအား ဆယ်ပုံပုံ ရှစ်ပုံခန့်အထိ မြှင့်တင်ကာ ဒရွတ်ဆွဲလျက် အတင်းလိုက်လေတော့သည်။
ဖိုးရှောက်လင်နှင့် မိန်းမပျိုလေးတို့ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ဖင်ဒရွတ်ဆွဲလျက် ဇရပ်ပတ်လည်လိုက်လိုးနေပုံမှာ အတော်ပင် ကြည့်ကောင်းနေ တော့သည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးတွင် မိန်းမပျိုမှာ ဖိုးရှောက်လင်အား မယှဉ်နိုင်တော့ဘဲ ဖိုးရှောက်လင်၏ ခရမ်းညိုသီးသဏ္ဍာန် လီးကြီးနှင့် သူမ၏ ပဲကြီးစေ့သဏ္ဍာန် စောက်စေ့မှာ ထိလုထိခင်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာလေ၏။ အောင်နိုင်သူအပြုံးဖြင့် တစ်ချက်ပြုံးပြီးနောက် အသက်အောင့်ကာ ကဲ … လာလေရော့ဟု ဖိုးရှောက်လင်က နောက်ဆုံးတိုက်ကွက်ထုတ်လိုက်ရာ … “ အား ” ဟူသော အသံနက်ကြီး မချိမဆန့်ပေါ်ထွက်လာလေတော့သည်။ မိန်းမပျိုလေး၏ အော်သံတော့ မဟုတ်ပေ။ ဖိုးရှောက်လင်၏ နှုတ်ဖျားမှ ထွက်ပေါ်လာသော အသံသာ ဖြစ်ပေတော့သည်။ ဖြစ်ပုံက ဒီလို။ ဖင်ဒရွတ်ဆွဲသိုင်းကွက်တွင် အားနည်းချက်တစ်ခုရှိသည်။ ၄င်းမှာ အောက်ခံကြမ်းပြင်မချောလျှင် လပြွတ်အား ညှောင့်စူးခြင်းပင်တည်း။ ယခုလည်း ဖိုးရှောက်လင်မှာ နောက်ဆုံးတိုက်ကွက်အနေဖြင့် အားကုန်သုံးပြီး ဆောင့်လိုက်သောအခါ ဇရပ်ကြမ်းပြင်မှ ဝါးမျက်က လပြွတ်အား ထိုးခွဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားသောကြောင့်တည်း။ ဝါးမျက်ဖြင့် ထိုးခွဲခံလိုက်ရသော လပြွတ်နှစ်လုံးအား နတ်ကွတ်အကျောပိတ်သိုင်းကွက်ဖြင့် ကပျာကယာပြန်ထည့်ကာ ဖိုးရှောက်လင်တစ်ယောက် ဇရပ်ထောင့်သို့ ဆုတ်သွားလေသည်။ ၄င်းနောက် ဘောင်းဘီအိတ်ထဲမှ ခွေးမစောက်ဖုတ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးကို ထုတ်၍ လိမ်းလိုက်ရာ အံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းလောက်အောင်ပင် ဒဏ်ရာမှာ ပျောက်ကင်းသွားလေတော့သည်။ ဖိုးရှောက်လင် လပြွတ်ကွဲသွားစဉ်က အရပ်ပျက်ရယ်နည်းဖြင့် မခိုးမခန့်ရယ်နေသော မိန်းမပျိုလေးမှာ လပြွတ်ကွဲဒဏ်ရာ မျက်စိရှေ့၌ပင် ပျောက်ကင်း သွားသည်ကို မြင်လိုက်သည်နှင့် အရယ်ရပ်သွားကာ … “ သြော် … ရှင့်ဆီမှာ ခွေးမစောက်ဖုတ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေး ရှိတာပဲကိုး ”ဟု မှတ်ချက်ချလိုက်လေသည်။ ထိုအခါ ဘာမဟုတ်သည့် မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက်၏ အရှက်ကွဲခံလိုက်ရသော ဖိုးရှောက်လင်မှာ ဒေါသတကြီးဖြင့် …“ ဟဲ့ … ဗိုင်းတာမ … နင့်နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ ငါ့နာမည်က ဖိုးရှောက်လင် … သူများဖင်မပြောနဲ့ ကိုယ့်ဖင်ကို ပြန်ချတာတောင် သုံးခါရှိနေပြီ။ နင့်စအိုကို ဖွင့်သေးတာပေါ့ ”ဟု ကြိမ်းမောင်းရင်း ဇရပ်ထောင့်သို့ လျှောက်လာလေတော့သည်။ ဖိုးရှောက်လင်တစ်ယောက် ဖွားဖက်တော်ကြီးတယမ်းယမ်းဖြင့် သူ့ထံသို့ တစ်လှမ်းချင်းလျှောက်လာသည်ကို ကြည့်ရင်း၊ မိန်းမပျိုလေးက … “ ခွိခွိခွိ … ဒီလောက်လည်း ဒေါသမကြီးပါနဲ့ … ကျွန်မနာမည်ကလည်း ဖန်ရှောက်ခင်ပါတဲ့ရှင် … ပြီးတော့ ကြိုက်ကုန်းတောင်ကြားရဲ့ စစ်ဆေးရေးမှူးပဲ။ ကဲ … ရှင့်ပစ္စည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်းအထွာရှိမရှိ စစ်ဆေးမယ် …” ဟု ဆိုကာ ဇရပ်လက်ရမ်းကို လက်ထောက်ပြီး ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပေးလိုက်လေသည်။ ဖိုးရှောက်လင်လည်း အတွင်းအားကို လဖျားတွင် စုစည်းပြီးသကာလ ဖင်နှစ်လုံးကြားမှ ပြူထွက်နေသော ဖန်ရှောက်ခင်၏ ပြည်ကြီးငါးသဏ္ဍာန် စောက်ဖုတ်ကြီးအား သူ၏ငပဲကြီးနှင့် တေ့လိုက်လေသည်။ ၄င်းနောက် တော်သလင်းခွေးဘီလူးသိုင်း တစ်ရာ့ခြောက်ကွက်သုံးကာ တစွပ်စွပ် တဖွတ်ဖွတ်ဖြင့် တစ်ရာ့ခြောက်ခါ ခွေးလိုး လိုးလေတော့သည်။ ဖန်ရှောက်ခင်မှာ ဖိုးရှောက်လင်၏ တော်သလင်းသိုင်း တစ်ရာ့ခြောက်ကွက်ကို အသေအလဲ ကြိတ်မှိတ်အောင့်အည်းခံလိုက်ရလေသည်။ သို့သော် ဖန်ရှောက်ခင်သည်လည်း အောလောကတွင် ကျင်လည်လာသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်နီးပါးရှိပြီမို့ ခေသူမဟုတ်။ ဖိုးရှောက်လင်အား အောက်ပါ အတိုင်း စိန်ခေါ်လေတော့သည်။ “ ကဲ … ရှင်ကလည်း ဖိုးရှောက်လင် … ကျွန်မကလည်း ဖန်ရှောက်ခင်၊ ရှင်ကပဲ လိုးနိုင်မလား ကျွန်မကပဲ ခံနိုင်မလား ကြည့်ကြသေးတာပေါ့။ ကဲ … စတော့…”ဟု ဆိုကာ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သူမ၏ ဖင်အား စုံကိုင်၍ ဖြဲထားပေးလေသည်။ ဖိုးရှောက်လင်မှာ ချက်ချင်းပင် စမန်ထလာပြီး ဖန်ရှောက်ခင်၏ နီရဲရဲစအိုလေးအား မညှာမတာ ရက်ရက်စက်စက် လိုးလေတော့သည်။ ပွဲမှာ အတော်ပင် မြိုင်ဆိုင်ကြည့်ကောင်းလှပေသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက် ဖန်ရှောက်ခင်မှာ ဖင်ထိုင်ကျသွားသည်အထိအောင် အဆောင့်ခံလိုက်ရသော်လည်း ချက်ချင်းပင် ဖင်ဘူးတောင်း ပြန်ထောင်လာပေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ပြိုင်ပွဲ၏ အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်လာလေသည်။ ဖန်ရှောက်ခင်၏ စအိုမှာ ရေငတ်သော ငါးပါးစပ်ကဲ့သို့ အဆက်မပြတ် ပွရှုံ့ပွရှုံ့ ဖြစ်လာတော့သည်။ ထို့အတူ ဖိုးရှောက်လင်၏ လီးကြီးမှာလည်း ပုရစ်တွင်းထဲ ခေါင်းစိုက် နှိုက်နေသော စပါးကြီးမြွေကြီးကဲ့သို့ ဝင်သွားလိုက် ပြန်ထွက်လာလိုက် ဖြစ်နေလေတော့၏။ မှားတဲ့သူ ခံရတော့မည့်အခြေအနေသို့ ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း နှစ်ဦးစလုံးနားလည်လိုက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဖိုးရှောက်လင်မှာ သိုင်းကွက်အား အရှိန်လျော့ကာ တကွက်ကောင်းစောင့်ရင်း မှန်မှန်ဆောင့်နေလေတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဖန်ရှောင်ခင်၏ စအိုမှာ ရှုံ့ရာမှ ပွင့်အာထွက်လာသည်ကို ဖိုးရှောက်လင် သတိထားလိုက်မိလေသည်။ ဒါဟာ အခွင့်ကောင်းပဲဟု တွေးလျက် ဖိုးရှောက်လင် ဖင်ရှုံ့ကာ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အသားကုန်ဆောင့်လိုးလိုက်လေတော့သည်။ “ ဘူ ” အသံကြားလိုက်သော်လည်း နောက်ကျသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဖိုးရှောက်လင် သဘောပေါက်လိုက်တော့သည်။ တဆက်တည်းမှာပင် ဖန်ရှောက်ခင်၏ စအိုအတွင်းပိုင်းသို့ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဝင်သွားသော မိမိလီးမှာ စစ်ကနဲစစ်ကနဲ နာကျင်သွားသည်ကို ခံစားလိုက်ရရင်း … “ ဟင် … အီးပေါက်လီးကျိုးသိုင်းကွက် ”ဟု အလန့်တကြားရေရွတ်လိုက်မိတော့သည်။ “ ခိခိခိခိ … ဟုတ်တယ် … ရှင် ကျွန်မရဲ့ အီးပေါက်လီးကျိုးသိုင်းကွက် မိသွားပြီ။ ရှင့်လီးကျိုးသွားပြီ … ခိခိခိခိ …”ဟု ဖာသည်မသံဖြင့် ဖန်ရှောက်ခင်မှာ ရယ်မောနေလေတော့သည်။ဖိုးရှောက်လင်မှာ သူ၏လီးကြီးအား ဖန်ရှောက်ခင်၏ ဖင်ဝမှ ကပျာကယာဆွဲထုတ်ရင်း … “ မင်း … မင်း … ယုတ်မာလှချည်လား … အောလောကစည်းကမ်းကို ဖောက်ဖျက်ပြီး ငါ့လီးကို ကျိုးအောင်လုပ်တယ် …”ဟု အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့နှင့် ပြောလေတော့သည်။ အောလောကတွင် ဖင်ခံနေတုံး အီးမပေါက်ရဟူသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရှိလေသည်။ ၄င်းစည်းကမ်းအား အထက်လမ်း အောလောကသားများသာမက အောက်လမ်းအောလောကသားများကပါ လိုက်နာရပေသည်။
အဆိုပါစည်းကမ်းအား ဖောက်ဖျက်၍ အီးပေါက်လီးကျိုးသိုင်းကွက်အား ဖန်ရှောက်ခင်အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မထားသောကြောင့် ဖိုးရှောက်လင် ခမျာ အထိနာသွားရခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဖိုးရှောက်လင်မှာ သူ၏ လီးကျိုးကြီးကို နှမြောတသစွာ စိုက်ကြည့်နေရင်း ဇရပ်ထောင့်တွင် ငူငူကြီးထိုင်နေလေသည်။ ၄င်းလီးကြီးဖြင့် အောလောကတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျင်လည်ကျက်စားရင်း ပြိုင်ဘက်များ၏ စအိုများကို ပက်ပက်စက်စက် လိုးခွဲခဲ့သည်များကိုလည်း ပြန်မြင်ယောင်လာရင်း လီးရောလူရော ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်လာတော့သည်။ ဖန်ရှောက်ခင်မှာမူ ဖိုးရှောက်လင်၏ဖြစ်အင်ကို တစိမ့်စိမ့်အရသာခံကြည့်ရင်း တခစ်ခစ် ရယ်မောနေတော့သည်။ ၄င်းနောက် … “ ခစ် … ခစ် … ခစ်ခစ် … ဒီလောက်လည်း စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ ရှင်ရယ် … ရှင့်လီးကျိုးကို နဂိုအတိုင်း ပြန်ဆက်စေချင်ရင် မမလေး လီးမြင်ပြုံးနဲ့ လီးမြင်ပျော်တို့ အမွှာနှစ်ယောက်ဆီမှာရှိတဲ့ ‘စောက်ချီးတကော်၊ ငါးပိကြော်’လိမ်းဆေးကိုသာ ရအောင်ကြိုးစားပေတော့ …”ဟု ပြောရင်း ဇရပ်ပေါ်မှနေ၍ လေးဘက်ထောက် ဆင်းသွားလေတော့သည်။ ဖန်ရှောက်ခင်ပြောသွားသောစကားများကြောင့် ဖိုးရှောက်လင်၏ စိတ်ဓာတ်များ ပြန်လည်တက်ကြွလာပေတော့သည်။ စိတ်ထဲတွင်လည်း “ဟုတ်သားပဲ စောက်ချီးတကော်၊ ငါးပိကြော်လိမ်းဆေးဆိုတာ အလောင်းကောင်ရဲ့လီးကို လိမ်းပေးရင်တောင် ငေါက်ကနဲ ထတောင်တယ်လို့ အောလောကမှာ သတင်းမွှေးတဲ့ ဆေးပဲ။ ငါ့လီးကျိုးလောက်တော့ အေးဆေးပျောက်မှာပဲ”ဟု တွေးမိလေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် လီးမြင်ပြုံးနှင့် လီးမြင်ပျော် ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရှိရာသို့ အချိန်မီရောက်နိုင်ရန် စီးတော်လားကြီးရှိရာသို့ ကွတကွတဖြင့် ထွက်လာခဲ့ပေသည်။ ၄င်းနောက် ထုံးစံအတိုင်း စီးတော်လားကြီးအား ခရီးပြင်းနှင်နိုင်ရန်အလို့ငှာ တစ်ချီဂွင်းထုပေးလိုက်တော့သည်။
(အဲဒါ ဒီနေ့အထိ ပြောင်းထားပြီးသလောက်ပဲဗျာ … ပီဒီအက်ဖ်လုပ်မယ့် ဆရာတွေလည်း စုဆောင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ ရပါပြီ။)